Mpitsara – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Mpitsara
1:1 Taorian'ny nahafatesan'i Josoa, ny zanak'Israely naka hevitra ny Tompo, nanao hoe:, "Iza no hiakatra eo anoloantsika, hamely ny Kananita, ary iza no ho mpitarika ny ady?"
1:2 Ary hoy ny Tompo:: "Joda no hiakatra any. Indro, Efa nanolotra ny tany ho eo an-tànany. "
1:3 Ary hoy Joda tamin'i Simeona rahalahiny, "Mandehana miakatra amiko ianao ho any amin'ny lovako, ary hiady amin'ny Kananita, ary Izaho koa mba handeha hiaraka aminareo ho any amin'ny lovanao. "Ary Simeona dia nandeha niaraka taminy.
1:4 Dia niakatra Joda,, ary ny Tompo nahafaka ny Kananita, ary koa ny Perizita, eo an-tanany. Ka dia namely ny iray alina ny lehilahy amin'ny Bezeka.
1:5 Ary nahita an'i Adoni-bezeka tany Bezeka, izy, dia niady taminy, ka dia namely ny Kananita sy ny Perizita.
1:6 Dia nandositra Adoni-bezeka. Dia nanenjika azy ary nahafaka azy, Dia notapahin'ireo ny faran'ny ny tanany sy ny tongony.
1:7 Ary hoy Adoni-bezeka: "Mpanjaka fito-polo, amin'ny faran'ny ny tanany sy ny tongony notapahina, no nanangona ny sisa tavela ny hanina teo ambanin'ny latabatro. Toy ny efa nataony, toy izany no namaly ahy Andriamanitra. "Ary nitondra Azy nankany Jerosalema, ka dia maty teo.
1:8 Ary ny taranak'i Joda,, nanao fahirano an'i Jerosalema, noraisiny ilay izy. Dia namely azy tamin'ny lelan-tsabatra, nanolotra ny tanàna manontolo mba hodorana.
1:9 ary rehefa afaka izany,, midina, dia niady hiady amin'ny Kananita, izay nonina tany an-tendrombohitra, ary any atsimo, sy amin'ny tani-hay.
1:10 ary Joda, mivoaka hiady amin'ny Kananita, izay nonina tany Hebrona, (ny anaran 'izay avy fahiny i Kiriata-Arba) namono an'i Sesay, sy Ahimana, ary Talmay.
1:11 Ary niala teo mitohy, dia nankany amin'ny mponina any Debira, taloha anarana izay Kiriata-sefera, izany hoe, ny City ny Taratasy.
1:12 Ary hoy Kaleba:, "Na iza na iza no hamely Kiriata-sefera, ary Hataoto mariry ny azy, Dia homeko azy Aksa zanako-vavy ho vadiny. "
1:13 Ary rehefa Otniela, ny zanak'i Kenaza, ny zandrin'i Kaleba, efa nahazo azy, dia nomeny azy Aksa zananivavy ho azy ao anatin'ny fanambadiana.
1:14 Ary raha izy no nandeha an-tany hafa, Nampirisika azy ny vadiny, ka dia izy no hangataka saha tamin-drainy. Ary satria efa nisento raha nipetraka teo ny borikiny, Hoy Kaleba taminy, "Inona ity?"
1:15 Fa izy namaly: "Omeo tso-drano ho ahy. Fa efa nomenao ahy tany karankaina. Koa manome vonton-drano tany. "Noho izany, Caleb nomeny ny rafozany drano ny ambony sy ny ambany tany nampisotro tany.
1:16 Ary ny zanakalahin'i Kenita, ny havana 'i Mosesy, niakatra avy tany amin'ny tanàna be rofia, ny taranak'i Joda, tany an-efitra ny filokana, izay manatrika ny atsimon'i Arada. Ary izy ireo niara-nipetraka taminy.
1:17 Ary Joda nandeha Izy mbamin'ny rahalahiny Simeona, ary niara-dia namely ny Kananita, izay nonina tany Zephath, ka dia hamono azy ireo ho faty. Ary ny anaran'ny tanàna nataony hoe Horma, izany hoe, voaozona.
1:18 Ary ny Joda nisambotra an'i Gaza, sy ny faritra, sy Askelona ary koa Ekrona, amin'ny fari-taniny.
1:19 Ary Jehovah nomba an'i Joda, Ary nahazo ny tendrombohitra. Nefa izy tsy afa-handripaka ny mponina an-dohasaha. Fa be tamin'ny kalesy mitondra scythes.
1:20 Ary araka izay efa nolazain'i Mosesy, Hebrona dia nomeny an'i Kaleba, izay nandrava avy ao aminy izy telo lahy, taranaky ny Anakita.
1:21 Fa ny taranak'i Benjamina tsy handripaka ny Jebosita mponin'i Jerosalema. Ary ny Jebosita niaina tamin'ny taranak'i Benjamina any Jerosalema, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
1:22 Ny taranak'i Josefa koa niakatra hamely an'i Betela, ary Jehovah nomba azy.
1:23 Fa rehefa nanao fahirano ny tanàna, izay aloha hoe Lozy,
1:24 dia nahita lehilahy niala avy tao an-tanàna, ka hoy ireo taminy:, "Amintsika ny fidirana mankao an-tanàna, ary dia manao zavatra amin'ny famindram-po ho anareo. "
1:25 Ary rehefa nanambara azy ireo, dia namely ny tanàna tamin'ny lelan-tsabatra. Fa izany olona izany, mbamin'ny mpianakaviny rehetra, nafahana izy ireo.
1:26 Ary izay iraka lasa, dia nivoaka ho any amin'ny tanin'ny Hetita, Ary nanorina tanàna teo, ary ny anarany dia nataony hoe Lozy. Ary araka izany koa no antsoina hoe, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
1:27 Toy izany koa, Manase tsy nandringana Beti-sana sy Tanaka, ny zana-bohiny, na ny mponina tany Dora sy Ibleama sy Megido, ny zana-bohiny. Ary ny Kananita nanomboka ny hiaina miaraka aminy.
1:28 Avy eo, rehefa mafy ny Isiraely efa lehibe, no nanaovany azy nampanaovina fanompoana, nefa izy tsy vonona handringana azy.
1:29 Ary ankehitriny Efraima tsy hovonoina ho faty ny Kananita, izay nonina tany Gazera; fa tsy, Ary rehefa nitoetra tao aminy.
1:30 Zebolona tsy handripaka ny mponina tany Kitrona sy ny Nahalola. Fa tsy, ny Kananita nonina teo aminy ary lasa ny fanompoana.
1:31 Toy izany koa, Asera tsy handringana ny mponina tany Ako sy Sidona, Tany Alaba sy Akziba, sy ny tany Helba, sy ny tany Afika, ary Rehoba.
1:32 Ary nonina tany teo amin'ny Kananita, ny mponina tany amin'izany tany, fa tsy hamono azy ireo ho faty.
1:33 Naftaly ihany koa ny tsy handripaka ny mponina tany Beti-semesy sy Bet-anata. Ary nonina teo amin'ny Kananita mponina amin'ny tany. Ary ny Beti-shemeshites sy Bethanathites ireo mpandoa hetra ho azy.
1:34 Ary ny Amorita Niakatra tao amin'ny taranak'i Dana teo an-tendrombohitra, ary tsy nanome azy ireo toerana, ka mba hidina ho any amin'ny flatlands.
1:35 Ary nonina tao an-tendrombohitra tao Hara-Heresa, izay adika hoe 'mitovy biriky,'Ary Aialona sy Sha-alabbin. Fa ny tanan'ny taranak'i Josefa dia tena mavesatra, ary dia tonga ny fanompoana azy.
1:36 Ary ny fari-tanin'ny Amorita dia hatramin'ny fiakarana ho any amin'ny Scorpion, ny Rock sy ny toerana ambony.
2:1 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nankany amin'ny toerana mitomany, ka hoy Izy:: "Izaho nitondra anao avy tany Ejipta, ary nitari-dalana anareo ho any amin'ny tany, momba izay nianianany tamin'ny razanao. Ary nampanantena fa tsy hanafoana ny fanekeko aminareo Aho, eny, mandrakizay:
2:2 kanefa raha tsy mamorona ny fifanarahana tamin'ny tompon-tany. Fa tsy, tokony handravana ny alitarany. Kanefa ianao tsy vonona ny hihaino ny feoko. Nahoana ianao no manao izany?
2:3 Izany no antony, Ka izaho tsy ta-handringana azy eo anoloanareo, mba manana fahavalo, ary ny andriamaniny ka mba ho rava. "
2:4 Ary rehefa lasa ny anjely 'ny Tompo niteny izany teny izany ny zanak'Israely, dia nanandratra ny feony, ary samy nitomany izy mirahalahy.
2:5 Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe, ny Place mitomany, na ny toerana ny Ranomaso. Ary izy ireo niharam-boina sorona ho an'i Jehovah ao amin'io toerana io.
2:6 Dia nampodin'i Josoa ny vahoaka, Ary ny Zanak'Isiraely nandeha, samy ho any amin'ny rakitra soa, ka mba hahazoany mihazo izany.
2:7 Dia nanompo ny Tompo, nandritra ny androny rehetra, ary nandritra ny andro rehetra ny anti-panahy, izay niaina nandritra ny fotoana ela nanaraka azy, ary izay nahalala ny asa rehetra ny Tompo, izay efa nataony ho an'ny Isiraely.
2:8 Avy eo i Josoa, ny zanak'i Nona, ny mpanompon'i Jehovah, maty, rehefa folo amby zato taona.
2:9 Dia nalevina tao amin'ny fari-tanin'i amin'ny zara-taniny tao Timnata-sera, eo an-tendrombohitra Efraima, teo anoloan'ny ilany avaratra ny tendrombohitra Gasa.
2:10 Ary izany taranaka rehetra dia voangona any amin'ny razany. Ary nitsangana ny hafa, izay tsy nahalala ny Tompo sy ny asa efa nataony ho an'ny Isiraely,.
2:11 Ary ny Zanak'Isiraely nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, ary nanompo ireo Bala.
2:12 Dia nandao ny Tompo, ny Andriamanitry ny razany, Izay efa nitondra azy avy tany amin'ny tany Egypta. Dia nanaraka andriamani-kafa sy ny andriamanitry ny firenena izay nonina manodidina azy ireo, dia niankohoka izy. Dia nampahatezitra an'i Jehovah ny fahatezerana,
2:13 mahafoy azy, ary manompo an'i Bala sy Astarta.
2:14 Ary ny Tompo, rehefa tonga tezitra tamin'ny Isiraely, natolony teo an-tànan'ny mpamabo, izay nahazo azy ka nivarotra azy ho any amin'ny fahavalo izay miaina amin'ny lafiny rehetra. Ary tsy izy ireo no afaka hanohitra ny fahavalony.
2:15 Fa tsy, na aiza na aiza izy ireo te-handeha, ny tanan 'ny Tompo azy ireo dia teo ambonin'ny, araka izay nolazainy sy araka izay nianianany taminy. Ary ory indrindra izy ireo.
2:16 Ary Jehovah nanangana mpitsara, iza no hanafaka azy ireo avy any an-tanan 'ny mpampahory. Nefa tsy nety nihaino azy ireo.
2:17 Fornicating amin'ny andriamani-kafa sy fiankohofana azy ireo, haingana izy ireo nandao ny lalana teny izay efa nandroso ny razany. Ary rehefa renareo ny didin 'ny Tompo, izy ireo dia ny zavatra rehetra ny mifanohitra.
2:18 Ary raha ny Tompo no hanangana ny mpitsara, tamin'ny androny, dia nifindra tany amin'ny famindram-po, Ary nihaino ny fisentoan'ny ny ory, Ary nanafaka azy ireo avy namono ny mpampahory.
2:19 Fa rehefa maty ny mpitsara, dia niverina, ka dia nanao zavatra ratsy be mihoatra noho ny razany nanao, nanaraka andriamani-kafa, nanompo azy ireo, sy ny fiankohofana azy ireo. Tsy handao ny mikatsaka sy ny tena lalana nanaovany ditra izy, izay izy ireo zatra mandeha.
2:20 Ary ny fahatezeran'i Jehovah dia tezitra tamin'ny Isiraely, ka hoy Izy:: "Fa ity firenena ity dia efa foana ny fanekeko, izay efa niforona tamin'ny razany, ary nataony tsinontsinona mihaino ny feoko.
2:21 Ary noho izany, Tsy mba handringana Aho amin'ny firenena izay Josoa aoriana, rehefa maty izy,
2:22 amin'izay mba, ireny, Mba hizahako toetra ny Isiraely aho, raha toa na tsy hitandrina ny lalan'i Jehovah, ary handeha eo aminy, fotsiny araka izay nitandreman'ny razany izany. "
2:23 Noho izany, nahafoy ny zavatra rehetra ny Tompo ireo firenena, ary izy tsy vonona ny hanongana azy ireo haingana, na Izy no nahafaka azy ho eo an-tànan'i Josoa.
3:1 Ireo ny firenena navelan'i Jehovah, ka ny azy ireo mba hampianatra ny Isiraely sy izay rehetra tsy nahalala ny ady ny Kananita,
3:2 ka rehefa afaka izany, ny zanany dia mety hianatra ny hiady amin'ny fahavalony, ary hanana ny fahavononana hanao ady:
3:3 ny dimy andrianan'ny Filistina, sy ny Kananita rehetra, ary ny Sidoniana, ary ny Hivita, izay nonina tany an-tendrombohitra Libanona, avy any an-tendrombohitra Bala-hermona ka hatrany akaikin'i Hamata ny fidirana.
3:4 Ary nandao azy Izy, ka ireny zavatra ireny mba hizaha toetra ny Isiraely, raha toa izy ireo, na tsy nihaino ny didin 'ny Tompo, izay nampianarina ny razany izay nampitondrainy an'i Mosesy.
3:5 Ary noho izany, ny Zanak'Isiraely nonina teo amin'ny Kananita, ary ny Hetita, ary ny Amorita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita.
3:6 Ary naka ny zanakavavin'ireny ho vadiny, ka nanome ny zananivavy ho vadin'ny zanakalahin'ireny, ary nanompo ny andriamaniny.
3:7 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, ary raha nanadino Andriamaniny, raha nanompo ireo Bala sy Astarta.
3:8 Ary ny Tompo, dia ho tezitra ny Isiraely, natolony teo an-tànan'i Kosan-risataima, ny mpanjakan'i Mesopotamia, ka dia nanompo azy valo taona.
3:9 Dia nitaraina tamin'i Jehovah, izay nanangana mpamonjy ho azy, Ary nanafaka azy ireo, izany hoe, Otniela, ny zanak'i Kenaza, ny zandrin'i Kaleba.
3:10 Ary ny Fanahin 'ny Tompo tao aminy, ary nitsara ny Isiraely. Ary dia nivoaka izy mba hiady, ary ny Tompo nahafaka Kosana-risataima, ny mpanjakan'i Syria, ary reraka izy.
3:11 Ary nandry fahizay ny tany efa-polo taona. ary Otniela, ny zanak'i Kenaza, maty.
3:12 Ary ny Zanak'Isiraely niverina nanaovany izay ratsy eo imason'i Jehovah, izay nampahery an'i Eglona, ny mpanjakan'i Moaba, hamely azy ireo satria nanao izay ratsy eo imasony.
3:13 Ary miray aminy ny taranak'i Amona sy ny taranak'i Amalekita. Dia nivoaka izy ka namely ny Isiraely, Ary nahafaka ny tanàna be rofia.
3:14 Ary ny zanakalahin'i nanompo an'i Eglona, ny mpanjakan'i Moaba, for valo ambin'ny folo taona.
3:15 ary rehefa afaka izany,, dia niantso izy ho an'ny Tompo, izay nanangana mpamonjy ho azy, antsoina hoe Ehud, ny zanak'i Gera, ny zanak'i Benjamina, izay nampiasa na tanana ary koa ny ankavanana. Ary ny Zanak'Isiraely dia naniraka fanomezana ho an'i Eglona,, ny mpanjakan'i Moaba, aminy.
3:16 Ary nanao ny tenany ho ny sabatra roa lela, manana ny tahony, mipaka amin'ny afovoany, ny halavan'ny ampela-tanana. Ary nisikinany izany eo ambany ny lambany, ny sorok'ondry ankavanana.
3:17 Dia nanatitra ny fanomezana ho an'i Eglona,, ny mpanjakan'i Moaba. Ary fatratra tokoa Eglona matavy.
3:18 Ary rehefa nanolotra ny fanomezam-pahasoavana ho azy, dia nanaraka avy ny namany, izay tonga niaraka taminy.
3:19 Ary avy eo, izay niverina avy tany Gilgala ny sampy ireo, hoy izy tamin'ny mpanjaka, "Manana ny teny miafina ho anao, Ry mpanjaka ô. "Ary izy nandidy fahanginana. Ary raha izay rehetra teo aminy, raha efa lasa,
3:20 Ehoda niditra taminy. Ary izy nipetraka irery tao amin'ny vanin-taona mafana trano ambony. Ary hoy izy:, "Manana ny teny avy amin'Andriamanitra holazaiko aminao." Ary tamin'izay dia nitsangana teo amin'ny seza fiandrianany.
3:21 Ary Ehoda nampahazo ny ankavia, ary dia nandray ny sabatra teny am-balahany ankavanana. Ary natsatony tamin'ny kibony
3:22 ka mafy ny tahony nanaraka ny vary ho any amin'ny ratra, ary fonosina noho ny be dia be ny matavy. Fa tsy nisy hiala ny sabatra. Fa tsy, dia niala izany eo amin'ny tena araka izay namely izany. Ary niaraka tamin'izay dia, ny filahiany ny natiora, ny fahalotoany ireo kibony nivoaka.
3:23 Ary Ehoda tsara nandrindrina ny varavaran'ny trano ambony. Ary fiarovana ny barany,
3:24 dia niala ka lasa indray amin'ny alalan'ny fivoahana. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka, miditra, fa nahita ny varavaran'ny trano ambony dia ny nakatona, ka hoy izy:, "Angamba izy dia tapaka ho an-kibony ao amin'ny efitrano fahavaratra."
3:25 Ary rehefa avy niandry ela, mandra-menatra, ka nahita fa tsy nisy namoha ny varavarana, Dia naka ny fanalahidy, ary eo am-piandohan'ny izany, dia nahita ny tompony maty nandry tamin'ny tany.
3:26 fa Ehud, raha mbola tao fifanjevoana, afa-nandositra ka nandeha tamin'ny toerana ny sampy, avy izay efa niverina. Ary tonga tany any Seirata.
3:27 Ary niaraka tamin'izay dia nitsoka ny anjomara teo an-tendrombohitra Efraima. Ary ny zanak'Israely nidina niaraka taminy, Izy no mandroso eo anoloany.
3:28 Ary hoy Izy taminy:: "Araho aho. Fa Jehovah no nanafaka ny fahavalontsika, ny Moabita, eo an-tanantsika. "Dia nidina nanaraka azy ny, ary nibodo ny fitàna any Jordana, izay mita any Moaba. Ary tsy hamela na iza na iza mba hiampita.
3:29 Ary noho izany, dia namely ny Moabita tamin'izany andro izany, tokony ho iray alina, mahery rehetra sy ny lehilahy matanjaka. Tsy misy amin'izy ireo dia afaka ho afa-mandositra.
3:30 Ary Moaba mbola nanetry tena, amin'izany andro izany ny tanan 'i Isiraely. Ary nandry fahizay ny tany ho valo-polo taona.
3:31 Manarakaraka ireo dia, nisy Samgara, ny zanak'i Anata, izay namono enin-jato lahy tamin'ny Filistina tamin'ny fangadiny. Ary izy koa dia niaro ny Isiraely.
4:1 Fa rehefa maty Ehoda, ny zanak'i Isiraely indray nanaovany izay ratsy eo imason'i Jehovah.
4:2 Ary Jehovah nanolotra azy teo an-tànan'i Jabina, ny mpanjakan'i Kanana, izay nanjaka tany Hazora. Ary nanan-komandin'ny miaramilany i Sisera, fa Izy kosa nonina tany Harosetan'ny Jentilisa.
4:3 Ary ny Zanak'Isiraely nitaraina tamin'i Jehovah. Fa nanana kalesy sivin-jato amin'ny scythes, Ary nampahory azy mafy noho ny roa-polo taona.
4:4 Ary nisy mpaminanivavy, Deborah, Ny vadin'i Lapidota, izay nitsara ny olona amin'izany fotoana.
4:5 Ary izy nipetraka teo ambanin'ny dia hazo rofia, izay nantsoina hoe ny ny anarany, teo anelanelan'i Rama sy Betela, eo an-tendrombohitra Efraima. Ary ny zanak'Israely niakatra ho any aminy fitsarana rehetra.
4:6 Ary Debora naniraka ka niantso an'i Baraka, , zanak'i Abinoama,, avy any Kadesy ny Naftaly. Ary hoy izy taminy: "Ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, mampianatra anao: 'Mandehana, ka hitarika ny miaramila ho any an-tendrombohitra Tabara, ary dia ento miaraka aminao ny olona iray alina ny ady avy any amin'ny taranak'i Naftaly sy ny taranak'i Zebolona.
4:7 Avy eo dia hitarika anareo, eo amin'ny fitoerana ny ony Kisona, Sisera, ny mpitarika ny miaramilan'i Jabina, mbamin'ny kalesiny sy ny vahoakany maro be rehetra. Ary hatolotro eo an-tananao izy. ' "
4:8 Ary hoy Baraka taminy: "Raha ho avy hiaraka amiko, handeha aho. Raha tsy vonona ny hiaraka amiko, Tsy handeha aho. "
4:9 Ary hoy izy taminy: "Tokoa, Izaho dia hiaraka aminareo. Fa noho io fiovana, ny fandresena dia tsy ho malaza ho anao. Ary toy izany koa Sisera dia hatolotra eo an-tanam-behivavy. "Koa, Deborah nitsangana, ary nandeha niaraka tamin'i Baraka hankany Kadesy.
4:10 ary, niantso Zebolona ary ny Naftaly, niakatra ho any amin'ny ady iray alina ny lehilahy, Deborah manana ny orinasa.
4:11 Ary Hebera, ny Kenita, teo aloha niala sisa ny Kenita, rahalahiny, ny taranak'i Hobaba, ny havana 'i Mosesy. Ary dia efa nanorina ny lainy hatrany amin'ny lohasaha atao hoe Zananima, izay akaikin'i Kedesy.
4:12 Ary nisy nilaza tamin'i Sisera fa Baraka, , zanak'i Abinoama,, efa niakatra tany an-tendrombohitra Tabara.
4:13 Dia namory ny sivin-jato kalesy amin'ny scythes, ary ny tafika rehetra, avy tany Harosetan'ny Jentilisa amin'ny renirano Kisona.
4:14 Ary hoy Debora tamin'i Baraka: "Mitsangàna. Fa izao no andro izay mamonjy ny Tompo Sisera eo an-tananao. Fa izany no komandy. "Ary dia, Baraka nidina avy any an-tendrombohitra Tabara, ary iray alina ny ady lahy nanaraka azy.
4:15 Ary Jehovah namely Sisera-tahotra indrindra, ary ny kalesiny rehetra sy ny vahoakany maro be rehetra tamin'ny lelan-tsabatra, eo imason'i Baraka, be ka Sisera, niantsambotra niala tamin'ny kalesy, nandositra an-tongotra.
4:16 Ary Baraka nanenjika ny mandositra kalesy, ary ny tafika, hatrany Harosetan'ny Jentilisa. Ary ny vahoaka tao an-manontolo fahavalo dia voakapa, ho fandringanana tanteraka.
4:17 fa Sisera, raha mandositra, tonga teo amin'ny lain'i Jaela, ny vadin'i Hebera, ny Kenita. Fa nihavana Jabina, ny mpanjakan'i Hazora, Fa ny taranak'i Heber, ny Kenita.
4:18 Noho izany, Jaela nivoaka hitsena an'i Sisera, ka nanao taminy hoe:: "Midira atỳ amiko, tompoko. Enter, tokony tsy hatahotra. "Dia niditra ny lay, ary rehefa natao rakotry ny azy tamin'ny lamba,
4:19 dia nanao taminy hoe:: "Omeo ahy, Miangavy anao aho, rano kely. Fa tena mangetaheta aho. "Dia nanokatra ny siny hoditra nisy ronono, dia natohony hotsentsefin'i Jesosy. Dia nanarona azy.
4:20 Ary Sisera nanao taminy hoe:: "Mijoroa eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay. Ary raha misy tonga, nanontany anao sy ny hoe:, 'Aiza no hisy olona eto?'Dia mamaly, 'Tsy misy olona.' "
4:21 Ary dia Jaela, ny vadin'i Hebera, naka ny lalamby avy any amin'ny trano-lay, ary koa naka Mallet. Ary raha niditra tsy hita maso sy amin'ny fahanginana, dia nametraka ny lalamby noho ny tempoly ny lohany. Ary namely azy amin'ny Mallet, dia nandroaka azy ny alalan 'ny atidoha, hatrany amin'ny tany. Ary noho izany, manatevin-daharana ny torimaso lalina ho faty, dia azon'ny tsy nahatsiaro tena ka maty.
4:22 Ary indro, Baraka tonga, nanenjika an'i Sisera. ary Jaela, nivoaka hitsena azy, hoy izy taminy:, "Avia, dia hasehoko anao ny lehilahy izay tadiavinao. "Ary rehefa niditra ny trano-lay, dia nahita an'i Sisera mandainga maty, ny lalamby raikitra amin'ny fihirifany.
4:23 Dia toy izany no Andriamanitra manetry tena Jabina, ny mpanjakan'i Kanana, tamin'izany andro izany, teo anoloan'ny Zanak'Isiraely.
4:24 Ary nitombo isan'andro. Ary amin'ny tanana mahery izy ireo nahery Jabina, ny mpanjakan'i Kanana, mandra-naringana azy avy.
5:1 Amin'izany andro izany, Debora sy Baraka, , zanak'i Abinoama,, nihira toy izao avy, nanao hoe::
5:2 "Ianareo rehetra amin'ny Isiraely izay efa nanatitra ny fiainanareo ho loza, Misaora an'i Jehovah!
5:3 Henoy, Ry mpanjaka! Tandremo tsara, O mpanapaka! Izaho, fa Izaho, iza no hihira ho an'i Jehovah. Hihira ny salamo ho an'ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,!
5:4 Tompo O, rehefa niala tany Seira, ary nita ny alalan 'ny faritra Edoma, ny tany sy ny lanitra dia nafindra, ary ny rahona nandatsaka rano.
5:5 Ny tendrombohitra nihorohoro lasa teo anatrehan'ny tavan'ny Tompo, ary Sinai, eo anatrehan'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,.
5:6 Tamin'ny andron'i Samgara, ny zanak'i Anata, tamin'ny andron'i Jaela, ny lalana nangina. Ary na iza na iza niditra ny azy ireo, nandeha an-tongotra teny saro byways.
5:7 Ny lehilahy mahery nitsahatra, ka dia nitsahatra teo amin'ny Isiraely, mandra-Debora nitsangana, mandra-ny reny iray nitsangana teo amin'ny Isiraely.
5:8 Ny Tompo dia nisafidy ady vaovao, ary Izy no nanjera ny vavahadin'ny fahavalony. A ampinga ny lefona tsy hita teo anivon 'ny efatra alina tamin'ny Isiraely.
5:9 Ny foko tia ny mpitarika ny Isiraely. Ianareo rehetra izay, lehibe eo amin'ny safidy malalaka, nanolo-tena nandritra ny krizy, Misaora an'i Jehovah.
5:10 Hianareo izay mitaingin-boriky mikely aina, sy ianareo izay mipetraka eo amin'ny fitsarana, Ary ianareo izay mandeha eny an-dalana, miteny.
5:11 Aiza no namely ny kalesy niara-, ary ny miaramilan 'ny fahavalo dia voagejan'ny, amin'izany toerana, aoka ny mpitsara ny Tompo no lazaina, ary aoka ny famindrampo ho an'ny be herim-po ny Isiraely. Ary no ny vahoakan 'ny Tompo ho eo am-bavahady midina, ary hahazo fitarihana.
5:12 Mitsangàna, mitsangana, O Deborah! Mitsangàna, mitsangana, ary milazà canticle! Mitsangàna, Baraka, ary haka ny babo, Ry zanak'i Abinoama.
5:13 Ary ny sisa tavela amin 'ny olona voavonjy. Ny Tompo nifandahatra amin'ny mahery.
5:14 Ny avy amin'i Efraima, fa nandringana ireo amin'ny Amalekita, Ary ny manarakaraka azy, tamin'ny Benjamita, ireo ny olona, O Amalekita. avy Makira, dia nidina mpitarika, ary ny Zebolona, ireo izay nitarika ny tafika ny ady.
5:15 Ny mpifehy Isakara niaraka tamin'i Debora, dia nanaraka ny dian'ny Baraka, izay atahorana ho lany tamingana ny tenany, tahaka ny anankiray rivotra any an-tevana hantsana. Robena dia miady an-trano. Ny fifandirana lehibe hita eo fanahy.
5:16 Nahoana ianao no mipetraka eo amin'ny sisintany roa, ka mandre ny bleating ny ondry aman'osy? Robena dia miady an-trano. Ny fifandirana lehibe hita eo fanahy.
5:17 Gileada nitoetra tany an-dafin'i Jordana, ary Dan dia variana amin'ny sambo. Asera nitoetra teo amoron'ny ranomasina, ary nitoetra tao amin'ny seranan-tsambo.
5:18 Na izany aza tena, Zebolona ary ny Naftaly nanolotra ny ainy ho faty any amin'ny faritra Meroma.
5:19 Tonga ireo mpanjaka ka niady; ny mpanjakan'i Kanana, niady tao Tanaka, afa-tsy ny ranon'i Megido. Na izany aza anefa dia tsy naka babo.
5:20 Ny ady hamely azy ireo avy any an-danitra. ny kintana, sisa ny filaminana sy ny antokony, niady tamin'i Sisera.
5:21 Ny ony Kisona nitondra lasa ny fatiny, ny onrushing riaka, Ny ony Kisona. Ry fanahiko, mandia ny tsy nivadika!
5:22 Ny kitron-tsoavaly dia rava, raha matanjaka ny fahavalo nandositra fahatezerana, ka nirohotra ho amin'ny faharavana.
5:23 'Ho voaozona anie ny tany Meroz!'Hoy Ilay Anjelin'i Jehovah. 'Ho voaozona anie ny mponina! Fa tsy tonga ny fanampiana 'ny Tompo, ny fanampiana ny lehilahy mahery indrindra. '
5:24 Hotahina amin'ny vehivavy dia Jaela, ny vadin'i Hebera Kenita. Ary sambatra izy tao amin'ny tabernakely.
5:25 Ary nangataka azy ho rano, ary ronono aza no nomeny azy, ary nanolotra azy tamin'ny lovia rononomandry mendrika ho an'ny mpanapaka.
5:26 Izy hametraka ny ankavia ho amin'ny fantsika, Ary ny tànany ankavanana ho amin'ny mpiasa ny Mallet. Dia namely an'i Sisera, nitady eo an-dohany fitoerana teo ho an'ny ratra, ary manindrona mafy ny fihirifany.
5:27 Teo anelanelan'ny tongony, dia simba. Dia reraka izy, ary nandroso. Ary curled teo anatrehan'ny tongony, ary nandry tao manana aina sy fadiranovana.
5:28 Nibanjina ny reniny tamin'ny varavarankely sy ninaonaona. Dia niteny avy any an-trano ambony: 'Nahoana no kalesiny avy hatrany amin'ny tafaverina? Nahoana no ny tongotry ny ekipan-tsoavaly dia miadana?'
5:29 Iray izay hendry noho ny sisa vadiny Namaly tamin-dreniny-in-lalàna ity:
5:30 'Angamba izy izao mizara ny babo, ary ny tsara tarehy indrindra eo amin'ny vehivavy no nofidina ho azy. Akanjo samy hafa loko no efa natolotra an'i Sisera ho babo, sy ny entana isan-karazany no efa voaangona noho ny haingo ny vozon'ny. '
5:31 Tompo O, dia mety ho very ny fahavalonao rehetra,! Fa mety izay tia isehoanareo amin'ny voninahitra, tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny ny fiposahanao. "
5:32 Ary nitsahatra ny tany efa-polo taona.
6:1 Ary ny Zanak'Isiraely nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, izay namonjy azy ho eo an-tànan'ny Midiana fito taona.
6:2 Ary be dia be izy ireo azon'ny herin'ny azy. Ary nanao lavaka ho an'ny tenany sy ny lava-bato eny an-tendrombohitra, ary tena toerana voaro mafy ho an'ny fiarovana.
6:3 Ary rehefa namboly ny Isiraely, Midiana sy ny Amalekita, ary ny sisa amin'ny firenena atsinanana niakatra,
6:4 ary ny fiarahany nanipy baolina ny lainy teo aminy, izy ireo nandrava izay rehetra nambolena, ka hatrany amin'ny fidirana ho any Gaza. Dia namela na inona na inona mba hanohanana ny fiainana teo amin'ny Isiraely, na ondry aman'osy, na omby, na boriky.
6:5 Fa izy sy ny ondry andrasany rehetra tonga tamin'ny an-dainy, ka dia feno ny toerana rehetra, tahaka ny valala, tsy tambo isaina ny olona maro be sy ny rameva, nampivaloharika na inona na inona izy ireo nikasika.
6:6 Ary ny Isiraely dia nanetry tena indrindra teo imason'ny Midiana.
6:7 Dia nitaraina tamin'i Jehovah, mangataka fanampiana hamely ny Midiana.
6:8 Ary izy naniraka azy ireo lehilahy izay mpaminany, ka hoy Izy:: "Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: 'I nahatonga anao hiakatra avy tany Ejipta, ary nitari-dalana anareo ho afaka tamin'ny taranak'i fanandevozana.
6:9 Ary nanafaka anareo tamin'ny tanan'ny Egyptiana sy tamin'ny fahavalony rehetra izay nampahory anao. Ary pandroakany azy eo tonga, ary nahavonjy ny taniny ho anao.
6:10 Ary hoy izaho:: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary aza matahotra ny andriamanitry ny Amorita, izay tompon'ny tany ipetrahanao. Fa ianareo tsy nety nihaino ny teniko. ' "
6:11 Ary nisy anjelin'ny Tompo tonga, Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo terebinta hazo, izay tao Ofra, ary izay an'ny Joasy, ny raim-pianakaviana ny Ezri. Ary raha mbola Gideona zanany nively sy manadio ny vary teo amin'ny famiazam, ka mba handositra ny Midiana,
6:12 Ilay Anjelin'i Jehovah niseho taminy, ka hoy Izy:: "Ny Tompo no momba anao, mahery indrindra ny olona. "
6:13 Fa hoy Gideona taminy: "Miangavy anao aho, tompoko, raha toa ny Tompo momba anay, nahoana no izany nanjo anay? Aiza ny fahagagana, izay namaritra ny razantsika, raha hoy izy ireo, 'Ny Tompo nitondra antsika niala avy tany Ejipta.' Fa ankehitriny efa nahafoy ny Tompo antsika, ka nanolotra anay eo an-tànan'ny Midiana. "
6:14 Ary Jehovah miondrika mijery azy, ka hoy Izy:: "Mivoaha amin'izany, ny herinao, ary dia hanafaka ny Isiraely amin'ny tanan'ny Midiana. Fantaro fa Izaho no naniraka anao. "
6:15 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy:: "Miangavy anao aho, tompoko, amin'inona no hanafaka ny Isiraely? Indro, ny fianakaviako no osa indrindra eo amin'ny Manase ny, ary izaho no kely indrindra ao amin'ny ankohonan-draiko. "
6:16 Ary hoy Jehovah taminy: "Izaho no homba anao. Ary noho izany, hokapainao Midiana toy ny olona iray monja. "
6:17 Ary hoy izy:: "Raha mahita fitia eo anatrehanao, omeo famantarana fa Hianao no miteny amiko.
6:18 Ary enga anie ianao tsy mampitony avy eto, mandra-hiverina aminao, mitondra sorona sy ny fanatitra hohanina izany aminareo. "Dia namaly, "Izaho no hiandry ny hiverina."
6:19 Ary Gideona dia niditra, Ary nahandro osy, ary nanao mofo tsy misy masirasira avy amin'ny ohatry ny koba tsara toto. Sy mametraka ny nofo tao anatin'ny harona, ary ny fametrahana ny ron-kena ny nofo tao anatin'ny vilany, azony koa izy rehetra dia tambanin'ny hazo terebinta, ary nanatitra azy ho azy.
6:20 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah nilaza taminy, "Raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, ary hametraka azy ireo izany vatolampy, ary aidino ny ron-kena eo aminy. "Ary rehefa dia efa nanao izany,
6:21 Ilay Anjelin'i 'ny Tompo omena ny faran'ny tehina, izay izy nihazona teny an-tànany, Ary nanendry ny hena sy ny mofo tsy misy mofo. Ary nisy afo niakatra avy amin'ny vatolampy, Ary nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy mofo. Ary Ilay Anjelin'i Jehovah nanjavona tsy ho eo imasony.
6:22 ary Gideona, fantany fa efa ny Anjelin'i Jehovah, nanao hoe:: "Indrisy, ny Tompo Andriamanitra! Fa efa nahita Ilay Anjelin'i Jehovah nifanatrika. "
6:23 Ary hoy Jehovah taminy: "Fiadanana ho anareo. Aza matahotra; tsy ho faty ianao. "
6:24 Noho izany, Gideona nanorina alitara ho an'i Jehovah teo, ary ny anarany dia nataony hoe, ny Fiadanana 'ny Tompo, na dia hatramin'ny andro ankehitriny. Ary raha mbola tany Ofra, izay avy amin'ny fokon'i Ezri,
6:25 alina iny, hoy ny Tompo taminy: "Makà vantotr'ombilahy ny rainao, ary hafa ny omby ny fito taona, ka dia ho handringana ny alitaran'i Bala, izay rainao. Ary hokapainao ny Ala kely Masina izay manodidina ny alitara.
6:26 Ary ianao no hanao alitara ho an'i Jehovah Andriamanitrao, am-tampon'ny vatolampy ity, izay no nametraka ny hatao fanatitra eo anatrehan'i. Ary dia alao ilay ombilahy faharoa, ary izao no atero ho fanatitra dorana teo ambonin'ny antontan-kitay, izay no notapahin'ny ny Aseraha. "
6:27 Noho izany, Gideona, naka folo lahy avy amin'ny mpanompony, nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra azy. Fa natahotra ny fianakavian-drainy, ary ny mponina tao amin'izany tanàna izany, izy tsy nety nanao izany tamin'ny antoandro. Fa tsy, dia vita ny zava-drehetra tamin'ny alina.
6:28 Ary rehefa hitan'ny mponina tao amin'izany tanàna izany efa nitsangana maraina, dia nahita ny alitaran'i Bala rava, ary ny Ala kely Masina nikapa, ary ilay ombilahy faharoa dia napetrany teo ambonin'ny alitara, izay avy eo dia voaorina.
6:29 Dia hoy izy ireo niresaka, "Iza no nanao izany?"Ary rehefa nanontany na aiza na aiza raha ny amin'ny mpanoratra ny asa, voalaza hoe:, "Gideona, ny zanak'i Joasy,, nanao izany rehetra izany. "
6:30 Ary hoy koa izy tamin'i Joasy: "Mamoaka ny zanakao eto, ka mba hovonoina ho faty. Fa efa nandrava ny alitaran'i Bala, ary efa nikapa ny Aseraha masina. "
6:31 Fa namaly azy ireo: "Azonao ho avengers Bala, mba hiady ho azy? Na iza na iza no fahavalo, aoka izy ho faty eo anatrehan'ny fahazavana tonga rahampitso; raha izy no andriamanitra, aoka izy hiaro tena tamin'ny azy hanamarina izay efa nanary ny alitarany. "
6:32 Nanomboka tamin'io andro, Gideona dia nataony hoe Jerobala, satria efa nilaza Joasy, "Aoka Bala no hamaly hiaro tena tamin'ny azy izay nazerany ny alitara."
6:33 Ary noho izany, Midiana rehetra, ary ny Amalekita, ary ny atsinanana nivory firenena. Ary nita an'i Jordana, dia nitoby teo amin'ny lemaka Jezirela.
6:34 Fa ny Fanahin 'ny Tompo niditra tao Gideona, izay, hitsoka ny anjomara, nampiantso ny taranak'i Abiezera, ka mba hanara-dia azy.
6:35 Ary nandefa iraka ho any Manase, izay koa nanaraka Azy, sy ny iraka ho any Asera, sy Zebolona, sy Naftaly, izay nandeha nitsena azy.
6:36 Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: "Raha no hamonjenao ny Isiraely araka ny tanako, araka izay nolazainao:
6:37 Dia hampitoetra volon'ondry ity volon'ondry eo amin'ny famoloana. Raha hisy ando ny volon'ondry ihany, ary ny tany maina, Ho fantatro fa ny tanako, araka izay efa nolazainareo, no hanafaka ny Isiraely. "
6:38 Ary dia toy izany natao izany. Ary nifoha tamin'ny alina, fanolanana ny volon'ondry, dia nameno fanaka ny ando.
6:39 Ary hoy indray izy tamin'Andriamanitra: "Aza malahelo ny fahaviniranao amin'i enkindled hamely ahy, raha maka fanahy indray, mitady famantarana eo amin'ny volon'ondry. Mivavaka aho mba volon'ondry ihany no ho maina mety, ary ny tany dia mety ho kotsan'ny ando. "
6:40 Ary tamin'io alina io, Andriamanitra dia nanao araka izay efa nangataka. Ary efa maina ny volon'ondry ihany, ary nisy ando ny tany rehetra.
7:1 Ary toy izany koa Jerobala, izay ihany koa Gideona, miakatra amin'ny alina, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy, Nankany amin'ny loharano izay atao hoe Haroda. Ary ny tobin'ny Midiana dia teo an-dohasaha, ho any amin'ny faritra avaratra ny havoana andrandraina.
7:2 Ary hoy Jehovah tamin'i Gideona: "Ny olona miaraka aminao maro, fa ny Midiana, ka tsy mba hatolotra eo an-tanany, ho an'ny Isiraely, dia mety voninahitra ahy, ka ataovy hoe:, 'Nafahana aho noho ny heriny.'
7:3 Hiteny amin'ny olona, ary torio ho ren'ny rehetra, 'Na iza na iza no matahotra na ny tahotra, Aoka izy hiverina. 'amby roa-roa arivo ny olombelona amin' ny olona an-tendrombohitra Gileada niala ary niverina, ary iray alina no sisa ihany.
7:4 Ary hoy Jehovah tamin'i Gideona: "Ny olona Mbola maro ihany. Hitarika azy ho any amin'ny rano, ary any no hizahako toetra azy. Ary izay mikasika izay voalazako taminao va fa mba handeha hiaraka aminareo, Aoka handeha; dia izay no handrara ny handeha, aoka izy hiverina. "
7:5 Ary rehefa ny olona efa nidina ho any amin'ny rano, hoy Jehovah tamin'i Gideona: "Na zovy na zovy no am-pofoany ny rano amin'ny lelany, toy ny alika matetika am-pofoana, ianao no hahasaraka azy mitokana. Ary ireo izay hisotro amin'ny hiondrika ny lohalika dia ho eo amin'ny lafiny iray koa. "
7:6 Ary toy izany ny isan 'ireo izay nilelaka rano ny rano, alalan'ny fitondrana azy amin'ny tanana tamin'ny vava, dia telon-jato lahy. Ary ny sisa amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hiondrika nisotro ny lohalika.
7:7 Ary hoy Jehovah tamin'i Gideona: "Ny telon-jato lahy izay nilelaka rano ny rano, Izaho no hanafaka anao, dia hanolotra ny Midiana eo an-tananareo. Fa aoka ny sisa rehetra amin'ny vahoaka hiverina ho any amin'ny taniny. "
7:8 Ary noho izany, naka sakafo sy trompetra, araka ny isany, nasainy avokoa ny sisa amin'ny vahoaka mba hiverina ho any amin'ny lainy. Ary ny telon-jato lahy, dia nanolotra ny tenany ho an'ny ady. Ary ny tobin'ny Midiana dia teo ambany, tao an-dohasaha.
7:9 Dia araka izany alina, hoy ny Tompo taminy: "Mitsangàna, ary midina any an-toby. Fa efa natolotro eo an-tananao.
7:10 Fa raha matahotra ny handeha irery, aoka ny mpanomponao hidina miaraka aminao Pora.
7:11 Ary rehefa handre izay izy ireo nanao hoe:, dia ny tananao ho hery, dia ho hidina matoky kokoa teo an-toby ny fahavalo. "Koa, dia nidina tamin'i Pora mpanompony ho any ny ampahany amin 'ny toby, ary nisy mpiambina ny olona efa voaomana hiady.
7:12 fa Midiana, ary ny Amalekita, ary ny atsinanana firenena namelatra nandry teny an-dohasaha, maro be toy ny valala. ny ramevany, koa, dia tsy hita isa, tahaka ny fasika izay lainga teo amoron'ny ranomasina.
7:13 Ary nony efa tonga Gideona, nisy olona niteny ny namany nofy. Dia nitantara ny zavatra hitany, amin'izao fomba izao: "Nahita nofy, ka dia nataoko ho amiko toy ny hoe mofo, mofo ambany lavenona avy amin'ny vary hordea nikodiadia, nidina ho any amin'ny tobin'ny Midiana. Ary na oviana na oviana dia tonga tao an-day, dia nasiany, ary nanjera izany, ary rava tanteraka tokoa izany tamin'ny tany. "
7:14 Izay tian'ny izy niteny, namaly: "Tsy zavatra hafa izany, fa ny sabatr'i Gideona, ny zanak'i Joasy,, lehilahy Isiraelita,. Fa Jehovah efa nanolotra ny Midiana eo an-tànany, miaraka amin'ny toby manontolo. "
7:15 Ary rehefa ren'i Gideona ny efa nofy sy ny heviny, dia niankohoka teo anatrehany. Dia niverina ho any amin'ny tobin'ny Isiraely, ka hoy Izy:: "Mitsangàna! Fa Jehovah no namonjy ny tobin'ny Midiana eo an-tanantsika. "
7:16 Dia nozarazarainy ny telon-jato lahy ho telo toko. Ary nomeny trompetra, ary siny tsy nisy rano, sy fanilo ho an'ny afovoan'ny siny, eo an-tanany.
7:17 Ary hoy Izy taminy:: "Inona no ho hitanao ahy hanao, hanao toy izany koa. Dia hiditra ny ampahany amin 'ny toby, ary inona no ataoko, dia hanaraka.
7:18 Raha ny anjomara teny an-tanako blares avy, izany koa no hitsoka ny anjomara, manodidina ny toby, ary mifalia miaraka amin 'ny Tompo sy Gideona. "
7:19 ary Gideona, sy ny telon-jato lahy izay nanaraka azy, niditra ny ampahany amin 'ny toby, teo am-piandohan'ny ny fiambenana eo afovoan'ny ny alina. Ary rehefa nanaitra ny mpiambina ireo, izy ireo nanomboka hitsoka ny trompetra sy mitehaka ny siny mifanaratsy.
7:20 Ary rehefa notsofina ny anjomara teny an-toerana telo manodidina ny toby, dia namaky ny siny ny rano, dia nihazona ny fanilo teny an, ary nitsoka ny anjomara teny an-tànany ankavanana. Ary ny vahoaka niantso, "Ny sabatr'i Jehovah sy Gideona!"
7:21 Dia samy nijoro teo amin'ny fitoerany eran'ny toby ny fahavalo. Ary toy izany koa ny toby manontolo tao fifanjevoana; ary dia nandositra, fitomaniana sy niantso.
7:22 Sy ny telon-jato lahy kanefa nanohy hitsoka ny trompetra. Ary Jehovah naniraka ny sabatra ho any amin'ny toby manontolo, ary ny kilemaina, ary nikapa ny hafa,
7:23 mandositra hatrany Bethshittah, ary ny Firenena ny Abela-mehola akaiky an'i Tabata in. Fa ny lehilahy amin'ny Isiraely nanenjika ny Midiana, niantso avy Naftaly sy ny Asera, ary ny Manase rehetra.
7:24 Ary Gideona naniraka olona hitety ny tany havoan'i Efraima, nanao hoe:, "Hidina hihaona Midiana, ary hipetraka ny rano mialoha ny azy hatrany Bethbarah sy Jordana. "Ary Efraima rehetra niantso mafy, ary nibodo ny rano mialoha ny azy ireo, hatrany Jordana ka hatrany Bethbarah.
7:25 Ary rehefa nahazo ny roa lahy amin'ny Midiana izy, Dia Oreba sy Zeba, napetrany Oreba ho faty teo am-batolampy Oreba, ary tena, Zeba, tao amin'ny famiazam-boalobok'i Zeba. Dia nanenjika ny Midiana, nitondra ny lohan'i Oreba sy Zeba Gideona, manerana ny rano Jordana.
8:1 Ary hoy ny lehilahy amin'ny Efraima nanao taminy hoe:, "Inona ity, fa te hanao, mba tsy nantsoinao izahay, raha nandeha hiady tamin'ny Midiana?"Ary dia nandrara azy mafy, ka tonga akaiky fampiasana herisetra.
8:2 Dia namaly azy ireo: "Inona anefa no mety ho azoko natao izay dia lehibe toy izay nataonao? Tsy iray bunch-boaloboka Efraima noho ny vintages ny Abiezera?
8:3 Ny Tompo dia hatolotra eo an-tananareo ny mpitondra Midiana, Dia Oreba sy Zeba. Inona no mety ho azoko natao izay dia lehibe toy izay nataonao?"Ary rehefa nilaza izany, ny toe-tsaina, izay mamontsina ka mamely mahafaty azy, dia nampangina.
8:4 Ary nony efa tonga tao Gideona Jordana, dia niampita teo ambonin'io koa ny telon-jato lahy izay nanaraka azy. Dia reraka tokoa no izy fa tsy afaka ny hanenjika ireo izay nandositra.
8:5 Ary hoy izy tamin'ny mponina tao Sokota, "Miangavy anao aho, homenay mofo ny olona izay miaraka amiko, fa izy ireny malemy loatra, dia mba ho afaka hanao Zebaha sy Zalmona, ny mpanjakan'ny Midiana. "
8:6 Ny mpitarika tao Sokota namaly, "Angamba ny felatanany an-tanan 'Zebaha sy Zalmona Eo an-tananao, ary noho izany antony, mangataka ianao fa homenay mofo ny miaramilamao. "
8:7 Ary hoy Izy taminy:, "Ary amin'izany, raha ny Tompo no efa nahavonjy Zebaha sy Zalmona eo an-tanana, Dia Hively ny nofony mbamin'ny tsilo sy songosongo avy any an-efitra. "
8:8 Ary niakatra niala teo, dia tonga tao Penoela. Ary izy niteny tamin'ny olona teo amin'ny fonenan toy izany. Ary izy ireo koa dia namaly azy, toy ny mponina tao Sokota ihany namaly.
8:9 Ary noho izany dia hoy izy taminy koa, "Rehefa niverina aho dia toy ny mpandresy soa aman-tsara, Izaho handrava ity tilikambo ity. "
8:10 Ary Zebaha sy Zalmona dia sasatra ny tafika manontolo. Dimy ambin'ny folo arivo lahy sisa avy tany rehetra ny miaramila ny olona atsinanana. Ary ny anankiray roa alina amby zato miaramila nahatan-tsabatra efa voakapa.
8:11 Ary Gideona niakatra tamin'ny lalana mankany izay nonina an-day, any amin'ny faritra atsinanan'i Noha ary Jogbeha. Ary namely ny tobin'ny fahavalo, izay matoky ka natahotra na inona na inona voka.
8:12 Dia nandositra Zebaha sy Zalmona. Ary Gideona nanenjika azy ka nahatratra, fandefasana ny tafika manontolo ho very hevitra.
8:13 Ary rehefa niverina avy tamin'ny ady alohan'ny fiposahan'ny masoandro,
8:14 dia naka ny zazalahy tsy ho eo amin'ny mponina tao Sokota. Dia nanontany azy Jesosy ny anaran 'ny mpitarika sy ny loholona tao Sokota. Ary voalaza amby fito-polo lahy.
8:15 Ka dia lasa nankany Sokota, ary hoy izy taminy: "Indreo Zebaha sy Zalmona, ny izay niteny mafy ahy, nanao hoe:: 'Angamba ny tànan'i Zebaha sy Zalmona eny an-tananareo, ary noho izany antony, mangataka ianao fa homenay mofo ny olona izay Nijaly sy kivy. ' "
8:16 Noho izany, Dia naka ny loholona tao an-tanàna, ary, mampiasa ny tsilo sy songosongo avy any an-efitra, dia nively azy ireo, ary nanapaka ny mponina tao Sokota ka nomontsaniny.
8:17 Ihany koa izy nanjera ny tilikambo tao Penoela koa, ary namono ny lehilahy tao an-tanàna.
8:18 Ary hoy izy tamin'i Zebaha sy Zalmona, "Inona no karazana olona dia ireo izay novonoinareo tany Tabara?"Namaly izy ireo, "Izy ireo dia tahaka anao, ary ny iray tamin'izy ireo dia tahaka ny zanaky ny mpanjaka. "
8:19 Fa ralehilahy namaly azy: "Izy ireo dia rahalahiko, ny zanaky ny reniko. Raha velona koa Jehovah, raha efa nitsimbina azy ireo, Dia tsy mba hovonoiko ianareo. "
8:20 Ary hoy izy tamin'i Jatera, zanany lahimatoa, "Mitsangàna, ka nataony ho faty. "Fa tsy nanatsoaka ny sabany. Fa raiki-tahotra, satria mbola zaza.
8:21 Ary Zebaha sy Zalmona:: "Tokony hitsangana ka miroata hamely hamely anay. Fa ny hery ny olona, ​​araka ny taonany. "Gideona nitsangana, Ary izy namono an'i Zebaha sy Zalmona. Dia nalainy ny firavaka sy ny studs, dia izay bozon'ny rameva ny mpanjaka dia matetika voaravaka.
8:22 Ary ny lehilahy amin'ny Isiraely tamin'i Gideona: "Tokony hanapaka anay, ary ny zanakao lahy, sy ny zanakao lahy, zanak'i. Fa nanafaka anay tamin'ny tanan'ny Midiana ianao. "
8:23 Ary hoy Izy taminy:: "Tsy hanapaka anareo. Ary aza ny zanako mpitondra anareo. Fa tsy, ny Tompo ihany no hanapaka anareo. "
8:24 Ary hoy Izy taminy:: "Izaho hangataka fangatahana iray avy aminao. Omeo ahy ny kavina avy amin'ny babo. "Fa ny Ismaelita dia zatra ny manao kavina volamena.
8:25 namaly izy ireo, "Tena vonona ny hanome azy ireo." Ary fampielezana ny lamba teo amin'ny tany, dia nanipy ny kavina amboniny avy tamin'ny zavatra nobaboina.
8:26 Ary ny lanjan'ny ny kavina izay nangatahiny dia fiton-jato amby arivo sekely volamena, ankoatra ny ravaka sarim, ary voavola, sy volomparasy fitafiana, izay ny mpanjakan'i Midiana dia zatra mampiasa, ary ankoatra ny rojo volamena amin'ny rameva.
8:27 Dia nataon'i Gideona efoda avy amin'ireo, ka dia nitandrina tao an-tanànany, Ofra. Ary ny Isiraely rehetra nijangajanga izany, ka tonga rava tamin'i Gideona sy ny mpianakaviny rehetra dia.
8:28 Fa Midiana tsy mbola nanetry tena teo anoloan'ny Zanak'Isiraely. Tsy nisy intsony izy ireo afaka mba hanandratra ny hatony. Fa ny tany nitoetra efa-polo taona, raha Gideona nitarika.
8:29 Ary toy izany koa Jerobala, ny zanak'i Joasy,, nandeha izy ka nitoetra tao an-tranony.
8:30 Ary nanana fito-polo lahy, izay nivoaka avy ny feny. Fa maro vady izy.
8:31 Fa ny vaditsindranony, naterany tany Sekema, niteraka zazalahy taminy atao hoe Abimeleka.
8:32 ary Gideona, ny zanak'i Joasy,, maty rehefa tratrantitra tsara sady taona, ary nalevina tao amin'ny fasan-drainy, tao Ofra, avy amin'ny fokon'i Ezri.
8:33 Fa rehefa maty Gideona, ny zanak'i Isiraely niala, ary nijangajanga tamin'ny zanak'i Bala. Ary izy ireo namely fanekena tamin'i Bala, ka dia izy no ho Andriamaniny.
8:34 Ary izy ireo tsy mba nahatsiaro ny Tompo Andriamaniny, izay namonjy azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra amin'ny manodidina.
8:35 Ary tsy nanao ireo maneho famindram-po ho an'ny taranak'i Jerobala Gideona, araka ny soa rehetra izay efa nataony ho an'ny Isiraely,.
9:1 Fa Abimeleka, ny zanak'i Jerobala, dia nandeha nankany Sekema, ny reny rahalahiny, Ary Izy niteny taminy, ary ho an'izay rehetra ny havana tao an-tranon'i ny reny dadabeny, nanao hoe::
9:2 "Lazao ny lehilahy rehetra tao Sekema: Iza no tsara ho anareo: dia fito-polo lahy, rehetra fito-polo lahy, tokony hanapaka anareo, na ny lehilahy iray no ho hanapaka anareo? Ka diniho koa fa Izaho no ny taolany sy ny nofony. "
9:3 Ary ny reny rahalahiny niresaka momba azy ny lehilahy rehetra tao Sekema, izany teny rehetra izany, ary nanongilana ny fony taorian'i Abimeleka, nanao hoe:, "Izy no rahalahy."
9:4 Dia nomeny azy ny lanjan'ny volafotsy fito-polo vola madinika avy amin'ilay toerana masina Bala-berita. Noho izany, nokaramainy izy noho ny amin'ny tenany sy nirenireny indigent olona, dia nanaraka Azy izy.
9:5 Ary lasa nankany amin'ny tranon-drainy tany Ofra, ary namono ny rahalahiny, fito-polo lahy, fito-polo lahy, teo ambonin'ny vato iray. Ary nisy afa-tsy Jotama, ny faralahin'i Jerobala, ka dia nitoetra tao niafina.
9:6 Ary ny lehilahy rehetra tao Sekema nivory, Ary ny firenena rehetra tao an-tanàna Milo, ary dia lasa izy ka nanendry an'i Abimeleka ho mpanjaka, afa-tsy hazo terebinta, izay nitsangana teo Sekema.
9:7 Ary nony efa nilaza izany tamin'i Jotama, dia nandeha izy ka nitsangana teo an-tampon'ny Tendrombohitra Gerizima. Dia nanandratra ny feony, dia niantso ka nanao hoe:: "Henoy aho, mponina tao Sekema, ka mba hihainoan'Andriamanitra anareo.
9:8 Hono, ny hazo hanosotra lasa mpanjaka ho azy. Ary hoy izy tamin'ny oliva, 'Manjakà aminay.'
9:9 Ary namaly, 'Ahoana no mahafoy ny matavy, izay na andriamanitra sy ny olona hampiasa, dia handeha hitsingevingevina amin'ny hazo?'
9:10 Ary hoy ny hazo tamin'ny aviavy, 'Avia, ary raiso ny hery mpanjaka ho anay.'
9:11 Ary namaly azy ireo, 'Ahoana no mahafoy ny mamy, ary ny tena mamy ny voankazo, dia handeha hitsingevingevina amin'ny hazo hafa?'
9:12 Ary hoy ny hazo tamin'ny voaloboka, 'Avia, ka manjakà aminay.'
9:13 Ary namaly azy ireo, 'Ahoana no mahafoy ny divay, izay manome fifaliana ho amin'Andriamanitra sy ny olona, ary hitsingevingevina amin'ny hazo hafa?'
9:14 Ary hoy ny hazo rehetra tamin'ny tsilo, 'Avia, ka manjakà aminay.'
9:15 Ary namaly azy ireo: 'Raha tena tianao nanendry ahy ho toy ny mpanjaka, avy hiala sasatra ao ambanin'ny alokalony ny. Fa raha tsy mety, dia aoka hisy afo hivoaka avy amin'ny tsilo, ary aoka handevona ny sederan'i Libanona. ' "
9:16 Koa ankehitriny, raha toa ianao ka olo-marina sy tsy manam-pahotana eo amin'ny fanendrena an'i Abimeleka ho mpanjaka hanjaka aminareo, Ary raha efa nanao soa Jerobala, ary tao an-tranony, ary raha namaly, mifandimby, ny soa azo avy aminy izay niady ny aminareo,
9:17 Ary iza no nanome ny ainy ho loza, ka mba hanafaka anao amin'ny tanan'ny Midiana,
9:18 na dia ankehitriny efa niodina tamin'ny taranaky ny raiko, ary efa namono ny zanany, fito-polo lahy, teo ambonin'ny vato iray, ary nanendry an'i Abimeleka, ny zanaky ny ankizivaviny, toy ny mpanjaka teo ny mponina tao Sekema, satria rahalahinao izy,
9:19 Koa raha ianao olo-marina sy efa nanao tsy misy tsiny ny olona Jerobala sy ny taranany, dia tokony ho faly amin'izany andro izany in Abimeleka, ary tokony hifaly ao aminao.
9:20 Fa raha efa nanao ratsy, aoka hisy afo hivoaka avy aminy ka handevona ny mponina ao Sekema sy ny tanàna Milo. Ary aoka hisy afo hivoaka avy amin'ny mponina ao Sekema sy ny tanàna Milo, ka handevona an'i Abimeleka. "
9:21 Ary rehefa nilaza izany, nandositra izy ka lasa nandeha ka hatrany Beri. Ary nonina teo amin'izany toerana, noho ny tahotra an'i Abimeleka, rahalahiny.
9:22 Ary Abimeleka dia nanjaka tamin'ny Isiraely nandritra ny telo taona.
9:23 Ary Jehovah nanisy fanahy mafy indrindra tamin'i Abimeleka sy ny mponina tao Sekema, izay nanomboka mankahala azy,
9:24 ary hametraka tsiny noho ny heloka bevava ny famonoana ny fito-polo lahy fito-polo, sy ny fandatsahana ny rany, eo Abimeleka, ny rahalahiny, sy amin'ny sisa ny mpitarika ny Sekemita, izay nanampy azy.
9:25 Ary nametraka otrika hamely azy tao amin'ny tampon'ny eny an-tendrombohitra. Ary raha mbola niandry ny fahatongavany, halatra nataony, naka babo avy amin'ny mpandalo. Ary izany dia nisy nilaza tamin'i Abimeleka.
9:26 Ary Gala, ny zanak'i Ebeda, nandeha niaraka tamin'ny rahalahiny, dia nita an'i Sekema. Ary ny mponina tao Sekema, nasandratra noho ny fahatongavany,
9:27 lasa nankany an-tsaha, nametraka ny fako amin'ny tanim-boaloboka, ary nanosihosy voaloboka. Ary raha mbola hira sy ny dihy, dia niditra tao amin'ilay toerana masina ny andriamaniny. Ary raha fanasana sy misotro, dia nanozona an'i Abimeleka.
9:28 ary Gala, ny zanak'i Ebeda, niantso: "Iza moa Abimeleka, ary inona no Sekema, fa tokony hanompo azy? Moa tsy ny zanak'i Jerobala, izay nanendry Zebola, mpanompony, ho mpanapaka ny taranak'i Hamora,, ny rain'i Sekema? Nahoana no hanompo io isika?
9:29 Enga anie ka olona iray no fametraka ity firenena ho eo ambanin'ny tanako, , mba hahazoany manaisotra Abimeleka tsy eo aminy. "Ary nisy nilaza tamin'i Abimeleka, "Angony ny vahoaka ny miaramila, sy ny fomba fiasa. "
9:30 Fa Zebola, ny komandin'ny tanàna,, rehefa nandre ny tenin'i Gala, ny zanak'i Ebeda, Nanjary tezitra indrindra.
9:31 Dia naniraka olona mangingina tamin'i Abimeleka, nanao hoe:: "Indro, Gala, ny zanak'i Ebeda, dia tonga tao Sekema sy ny rahalahiny, ary efa nametraka ny tanàna hamely anao.
9:32 Ary noho izany, mitsangana amin'ny alina, miaraka amin'ny vahoaka eo aminao, ka mandry miafina any an-tsaha.
9:33 Ary tamin'ny voalohany hazavana maraina, tahaka ny masoandro miakatra, maimaika hamely ny tanàna. Ary raha mivoaka hiady aminao, amin'ny vahoakany, hanao aminy izay afaka atao. "
9:34 Ary dia niainga Abimeleka, sy ny miaramilany rehetra, alina, ary izy nanendry an'i Sekema otrika akaikin'i efa-toerana.
9:35 ary Gala, ny zanak'i Ebeda, nivoaka, ka nitsangana teo amin'ny fidirana amin'ny vavahadin'ny tanàna. Ary dia niainga Abimeleka, sy ny miaramila rehetra niaraka taminy, avy any amin'ny toeram-ny Otrika.
9:36 Ary nony efa nahita Gala ny olona, dia hoy izy tamin'i Zebola, "Indro, ny vahoaka no nidina avy any an-tendrombohitra. "Dia namaly azy, "Hitanao ny aloky ny tendrombohitra, toy ny hoe izy ireo no lohan'ny lehilahy, ary toy izany koa ianao ho voafitaky ny fahadisoana izany. "
9:37 Indray, hoy Gala, "Indro, misy firenena nidina avy afovoan-tany, ary ny iray toko dia tonga eny an-dalana izay manatrika ho any amin'ny hazo terebinta izy. "
9:38 Ary hoy Zebola taminy: "Aiza ny vavanao izao, amin'ny nolazainao hoe:, 'Iza moa Abimeleka fa tokony hanompo azy?'Moa ve izany tsy ny olona fa efa natao tsinontsinona? Mandehana ka hiady aminy. "
9:39 Noho izany, Dia nivoaka Gala, tamin'ny vahoaka tao Sekema mijery, ary niady tamin'i Abimeleka,
9:40 izay nanenjika azy, nandositra, dia nitondra Azy ho ao an-tanàna. Ary maro no kapaina amin'ny lafiny, na dia ho any amin'ny vavahadin'ny tanàna.
9:41 Ary Abimeleka nanao toby tany Aroma. Fa Zebola nandroaka an'i Gala sy ny namany avy any an-tanàna, ka tsy namela azy ireo ho sisa mitoetra ao;.
9:42 Noho izany, amin'ny andro manaraka, ny olona lasa any an-tsaha. Ary rehefa izany efa nilaza tamin'i Abimeleka,
9:43 dia naka ny miaramilany, ka nizara azy ho telo toko, ary nampitoeriny otrika tany an-tsaha. Ka nahita fa ny olona efa niala an-tanàna, dia niainga izy ka nihazakazaka teo aminy,
9:44 miaraka ny orinasa, hiady ary nanao fahirano ny tanàna. Fa ny roa hafa nanenjika ny fahavalo orinasa hiely any an-tsaha.
9:45 Ary Abimeleka namely ny tanàna mandritra izany andro izany. Ary nosamboriny izany, ary namono ny mponina, ary fa nandringana azy, loatra ka dia niparitaka sira ao anatiny.
9:46 Ary raha ny zava-miaina ao amin'ny tilikambo tao Sekema nandre momba izany, dia niditra tao an-tempolin'ny andriamaniny, berita, izay efa namorona fanekena taminy. Ary izany dia noho izany, fa ny toerana efa naka ny anarany. Ary Tena voaro mafy.
9:47 Abimeleka, koa raha nahare fa ny mponina tao amin'ny tilikambo tao Sekema efa nakamban'Andriamanitra,
9:48 niakatra tany an-tendrombohitra Zalmona, miaraka ny vahoakany rehetra. Ary naka famaky, dia nikapa ny sampana ny hazo. Ary nametraka izany teny an-tsorony, ary mitondra azy io, hoy izy tamin'ny namany, "Izay mahita ahy manao, tsy maintsy ataovy faingana. "
9:49 Ary noho izany, fatratra nanapaka rantsan-kazo, dia nanaraka ny mpitarika. Ary manodidina ny toerana voaro mafy, dia dory amin'ny afo. Ary dia toy izany no nitranga fa, amin'ny setroka sy ny afo, iray arivo amby iray alina no maty, lehilahy sy ny vehivavy miaraka, ny nipetraka tao amin'ny tilikambo tao Sekema.
9:50 Ary Abimeleka, fametrahana nivoaka avy teo, tonga teo amin'ny tanànan'i Tebeza, izay nanodidina izy ka nanao fahirano ny tafika.
9:51 Ary nisy, teo afovoan'ny an-tanàna, fiarovana avo, izay lehilahy sy ny vehivavy dia miara-mandositra, rehetra ny mpitondra tao an-tanàna. Ary, rehefa tena mafy voaisy tombo-kase ny vavahady, dia nitsangana teo an-tampon'ny tilikambo izy hiaro ny tenany.
9:52 ary Abimeleka, manakaiky ny tilikambo, niady-kerim-po. Ary nanatona ny vavahady, dia niezaka ny dory amin'ny afo.
9:53 Ary indro, vehivavy iray, manipy ny sombiny vato fikosoham-bary avy any ambony, namely ny lohan'i Abimeleka, ary nanapaka ny karandohany.
9:54 Ary izy niantso haingana ny mpitondra ny fiadiany, ka nanao taminy hoe:, "Tsoahy ny sabatrao, ka mamely ahy, raha tsy izany dia mety azo lazaina fa novonoin 'ny vehivavy. "Ary, manao araka izay efa nandidian'i, dia namono azy.
9:55 Ary rehefa maty, rehetra tamin'ny Isiraely, izay niaraka taminy niverina tany an-tranony.
9:56 Ary toy izany koa Andriamanitra hamaly ny ratsy izay efa nataony tamin'i Abimeleka ny rainy tamin'ny namonoany ny rahalahiny fito-polo.
9:57 Ny Sekemita dia nomena ihany koa ny famaizana noho izay efa nataony, ary ny fanozonana nataon'i Jotama, ny zanak'i Jerobala, dia voafafy teny amin'ny azy ireo.
10:1 Ary taorian'i Abimeleka, ny mpitarika teo amin'ny Isiraely nitsangana, Tola, ny zanak'i Poha, ny ray rahalahin-drain'i Abimeleka, lehilahy avy tamin'ny Isakara, izay nonina tao Samira amin'ny tany havoan'i Efraima.
10:2 Dia nitsara ny Isiraely roa-polo-telo taona, dia maty izy ka nalevina tao Samira.
10:3 Manarakaraka ireo dia nandimby Jair, ny Gileadita, izay nitsara ny Isiraely roa-polo-taona roa,
10:4 manana zanakalahy telo-polo nipetraka teo ambonin'ny boriky telo-polo tanora, ary izay mpitarika ny tanàna telo-polo, izay avy ny anarany dia atao hoe Havota Jair, izany hoe, ny tanàna madinika an'i Jaira, na dia hatramin'ny andro ankehitriny, any amin'ny tany Gileada.
10:5 Dia maty Jaïra, Ary nalevina tao an-toerana izay atao hoe Kamona.
10:6 Fa ny Zanak'Isiraely nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, mifanendry fahotana vaovao ho ela, ary nanompo sampy, ireo Bala sy Astarta, sy ny andriamanitr'i Syria sy Sidona, sy Moaba sy ny taranak'i Amona, ary ny Filistina. Dia nandao ny Tompo, ka tsy mivavaka aminy.
10:7 Ary ny Tompo, lasa tezitra aminy, natolony teo an-tànan'ny Filistina sy ny taranak'i Amona.
10:8 Ary dia nijaly izy ireo, ary nampahory mafy ny valo ambin'ny folo taona, rehetra izay nonina tany an-dafin'i Jordana eo amin'ny tanin'ny Amorita, izay any Gileada,
10:9 ny toy izany hatraiza lehibe fa ny taranak'i Amona, niampita an'i Jordana, nandrava an'i Joda sy Benjamina sy Efraima. Ary ny Isiraely dia ory indrindra.
10:10 Ary niantso ny Tompo, hoy izy ireo: "Efa nanota taminao. Fa efa nahafoy an'i Jehovah Andriamanitsika, ary nanompo ireo Bala. "
10:11 Ary hoy Jehovah taminy: "Moa tsy ny Egyptiana, ary ny Amorita, sy ny taranak'i Amona, ary ny Filistina,
10:12 ary koa ny Sidoniana, ary ny Amalekita, ary Kanana, hampahory anao, ary toy izany koa no niantso ahy, ary namonjy anareo teny an-tànany?
10:13 Na izany aza anefa efa nahafoy Ahy, ary efa niankohoka teo anatrehany ianao andriamani-kafa. Izany no antony, Tsy mbola hanafaka anareo intsony.
10:14 Mandehana, ary hiantso ny andriamanitra izay nofidinao. Aoka hanafaka anao amin'ny andro tebiteby. "
10:15 Ary ny Zanak'Isiraely nanao tamin'ny Tompo: "Efa nanota izahay. Mety hamaly antsika amin'ny fomba na inona na inona sitrany anao. Nefa manafaka antsika izao. "
10:16 Ary nilaza izany, dia nandroaka ny sampy rehetra ny andriamani-kafa tao amin'ny faritra, ary nanompo ny Tompo Andriamanitra. Ary Izy nanendry araka ny fahoriana.
10:17 Ary avy eo ny taranak'i Amona, niantso avy miaraka, dia nanangana ny lainy tao Gileada. Ary ny zanakalahin'i Isiraely dia nanangona hamely azy, ary nanao toby tany Mizpa.
10:18 Ary ny mpitondra Gileada dia nifampilaza, "Na iza na iza eto amintsika no ho voalohany ny hanomboka hiady hamely ny taranak'i Amona, izy ho mpitarika ny vahoakan 'i Gileada. "
11:1 Tamin'izany fotoana izany, nisy Gileadita, Jefta, ny tena lehilahy mahery sy ny mpiady, ny zanaky ny vehivavy foana, Ary teraka Gileada.
11:2 Ary Gileada dia nanana vady, avy izay nahazo zanany. ary izy ireo, rehefa mihalehibe, nandroaka an'i Jefta, nanao hoe:, "Tsy afaka mandova ao an-tranon'ny rainay, satria dia teraka ny reny iray hafa. "
11:3 Ary noho izany, ary nandositra ny fisorohana azy, dia nonina tany amin'ny tany Toba. Ary ny olona izay indigent sy jiolahy niaraka taminy, dia nanaraka Azy izy toy ny mpitarika.
11:4 Ary tamin'izany andro izany, ny taranak'i Amôna niady tamin'ny Isiraely.
11:5 Ary rehefa naharitra nanafika, ny loholon'i Gileada nandeha ka mba hahazoany mihazo ny fanampiana Jefta, avy any amin'ny tany Toba.
11:6 Ary hoy izy ireo taminy, "Avia ho mpitarika anay, sy hiadianao amin'ny taranak'i Amona. "
11:7 Fa tsy mamaly azy: "Ianao ve tsy ireo izay nankahala ahy, ary iza no nanary ahy niala tamin'ny tranon'ny raiko? Ary Fa ankehitriny dia ianareo no mankaty amiko, terena ny tsy maintsy?"
11:8 Ary ny mpitondra Gileada tamin'i Jefta, "Saingy noho izany tsy maintsy mba efa nanatona anao izao, mba niainga aminay, sy hiadianao amin'ny taranak'i Amona, ary ho mpifehy rehetra izay miaina any Gileada. "
11:9 Jefta ihany koa hoy izy taminy: "Raha efa tonga atỳ amiko, ka mba hiady ho anareo hamely ny taranak'i Amona, Ary raha ny Tompo dia hatolotro ho eo an-tanako, no tena ho mpitarika?"
11:10 Ary ireo namaly Azy, "Ny Tompo izay mandre izany zavatra izany ny tenany ny Mpanelanelana sy ny Vavolombelona fa dia manao izay efa nampanantenaina."
11:11 Ary dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny mpitondra Gileada, ary ny vahoaka ho mpitondra azy ireo. Ary Jefta nilaza ny teniny rehetra, eo imason'ny Tompo, tany Mizpa.
11:12 Ary nandefa iraka ho any amin'ny mpanjakan'ny taranak'i Amona, izay nilaza ho azy, "Inona moa no vavolombelona amiko sy aminao, fa ianao dia manatona hamely ahy, tena mba Hataoto mariry ny taniko?"
11:13 Dia namaly azy ireo, "Satria nalain'ny Isiraely ny taniko, fony izy niakatra avy tany Ejipta, avy amin'ny fari-tanin'i Arnona, ka hatrany Jaboka ary Jordana. Koa ankehitriny, indray ireo soa aman-tsara ho ahy. "
11:14 Ary Jefta naniraka azy ireo indray, Dia nasain'i Jesosy hoy ny mpanjakan'i Amona:
11:15 "Hoy i Jefta ity: Ny Isiraely tsy naka ny tanin'i Moaba, na ny tanin'ny taranak'i Amona.
11:16 Fa raha niakatra avy tany Ejipta niara-, dia nandeha nitety ny efitra hatramin'ny Ranomasina Mena, ary dia niditra tao an Kadesy.
11:17 Ary naniraka olona nankany amin'ny mpanjakan'i Edoma, nanao hoe:, 'Avelao aho mba handeha hamaky ny taninao.' Nefa izy tsy vonona ny hanaiky ny fanangonan-tsonia. Toy izany koa, dia naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Moaba, izay koa dia nandà ny hanome azy andalan-teny. Ary noho izany dia naharitra ela tao Kadesy,
11:18 ary boribory manodidina amin'ny lafin'ny tany Edoma sy ny tany Moaba. Ary tonga tandrifin'i amin'ny tany atsinanana avy tany amin'ny tany Moaba. Ary nanao toby manerana ny Arnona. Nefa izy tsy vonona ny hiditra amin'ny sisin-tanin'i Moaba. (Mazava ho azy, Arnona no sisin-tanin'i Moaba.)
11:19 Ary ny Isiraely dia naniraka olona tany amin'i Sihona, ny mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tao Hesbona. Ary hoy izy ireo taminy, "Avelao aho mba hiampita ny alalan 'ny tany hatrany amin'ny ony."
11:20 fa, koa, tsinontsinona ny tenin 'i Isiraely, tsy hamela azy niampita ny sisintany amin'ny alalan'ny. Fa tsy, nanangona olona maro tsy tambo isaina, dia nivoaka hiady taminy tao Jahaza, ary nanohitra mafy.
11:21 Fa ny Tompo nahafaka azy, sy ny tafika manontolo, ho eo an-tànan'ny Isiraely. Ary izy namono azy, Ary nahazo ny tanin'ny Amorita, ny mponina amin'izany faritra,
11:22 amin'ny ny faritra rehetra amin'izay, hatrany Arnona ka hatrany Jaboka, ary hatramin'ny efitra ka hatrany Jordana.
11:23 Noho izany, ihany fa ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, izay nanjera ny Amorita, amin'ny alalan'ny Isiraely olony miady azy. Ary ankehitriny tianao handova ny taniny?
11:24 Tsy ny zavatra Kemosy andriamanitrao anao izay nananan'ny manana amin'ny rariny? Ary noho izany, zavatra ny Tompo Andriamanitra efa nahazo ny fandresena milatsaka ho antsika ho fananako.
11:25 Sa ianao, angamba, tsara noho Balaka,, ny zanak'i Zipora, ny mpanjakan'i Moaba? Sa ianao afaka hanazava ny zavatra ny fifandirana dia tamin'ny Isiraely, ary nahoana no niady taminy?
11:26 Ary na dia efa nonina tao Hesbona, ary ny zana-bohiny, ary tany Aroera, ary ny zana-bohiny, ary tany amin'ny tanàna rehetra akaikin'i Jordana telon-jato taona, nahoana no, fa toy izany ela, ataovy aloha na inona na inona momba izany filazana?
11:27 Noho izany, Aho, tsy manota ianao, fa manao ratsy ahy, manambara ny tsy ara-drariny amin'ny alalan'ny miady amiko. Enga anie ny Tompo ho Mpitsara sy ny Arbiter anio, ny Isiraely sy ny taranak'i Amona. "
11:28 Fa ny mpanjakan'ny taranak'i Amona no tsy vonona ny hanaiky ny tenin'i Jefta, izay naniraka ny iraka.
11:29 Noho izany, ny Fanahin 'ny Tompo dia nitoetra tamin Jefta, ary circling manodidina Gileada, ary Manase, ary koa Masfà Gileada, ary miampita niala teo ho any amin'ny taranak'i Amona,
11:30 nanao voady ho an'i Jehovah, nanao hoe:, "Raha hamonjy ny taranak'i Amona eo an-tanana,
11:31 na iza na iza no ho voalohany tsy ho ao amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena ahy, rehefa miverina soa aman-tsara avy any amin'ny taranak'i Amona, toy izany koa no ateriny ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. "
11:32 Ary Jefta niampita ny taranak'i Amona, ka mba hiady aminy. Ary Jehovah nanolotra azy teo an-tànany.
11:33 Dia namely azy izy hatrany Aroera, ka hatrany amin'ny fidirana ho any Minita, tanàna roa-polo, ary hatrany Abela, izay Voasaron'ny tanim-boaloboka, amin'ny indrindra dia be no maty. Ary ny taranak'i Amona no nampietrena ny zanak'Israely.
11:34 Fa nony niverina tany Mizpa Jefta, ho any an-tranony, ny vavy ihany no nitsena azy amin'ny ampongatapaka sy nandihy. Fa tsy nanan-janaka hafa.
11:35 Ary rehefa nahita azy, dia nandriatra ny fitafiany, ka hoy Izy:: "Indrisy, ny zanako vavy! Efa namitaka ahy, ary ianao no efa ambakaina. Fa niloa-bava tamin'i Jehovah, ary afaka manao na inona na inona hafa. "
11:36 Dia hoy ravehivavy namaly azy hoe:, "Ny raiko, raha efa niloa-bava tamin'i Jehovah, ataovy amiko na inona na inona efa nampanantena, satria nomena fandresena ho anao, ary koa ny famaliana hamely ny fahavalonareo. "
11:37 Ary hoy izy tamin-drainy: "Omeo ahy izany zavatra iray, izay mangataka. aoka aho, mba hirenireny ny havoana nandritra ny roa volana, ary mba malahelo ny virjiny miaraka amin'ny namany. "
11:38 Ary izy namaly ka nanao taminy, "Mandehana." Ary dia nalefany nandritra ny roa volana izy. Ary nony efa lasa nandeha izy sy ny namany sy ny namany, dia nitomany ny virjiny ao amin'ny tehezan-kavoana.
11:39 Ary rehefa tapitra ny roa volana, dia niverina tany amin'ny rainy, ary nataony taminy araka izay voady, na dia tsy misy olona fantany. avy ity, ny fanao teo amin'ny Isiraely nihalehibe, ary ny fomba fanao efa voatahiry,
11:40 toy izany, isan-taona rehefa avy mandalo, zazavavin'ny Isiraely nivory ho iray, ary hitomany ny zanakavavin'i Jefta, Gileadita, nandritra ny efatra andro.
12:1 Ary indro, ny fikomiana nitsangana in Efraima. Avy eo, raha mandalo manatrika ny avaratra, hoy koa izy tamin'i Jefte: "Rehefa nandeha niady tamin'ny taranak'i Amona, Nahoana no vonona ny hiantso antsika, mba hahafahantsika handeha hiaraka aminao? Noho izany, dia handoro any an-tranonao. "
12:2 Ary Izy namaly azy: "Izaho sy ny oloko efa tao ny ady mafy tamin'ny taranak'i Amona. Ary niantso anareo Aho, tena mba hanolotra fanampiana ho ahy. Ary ianareo tsy vonona ny hanao izany.
12:3 Ary mamantatra izany, Dia nanao ny aiko tsy ny tanany, ary namakivaky ny taranak'i Amona, ary ny natolotr'i Jehovah teo an-tanako. Inona no I meloka ka tokony ho, fa hitsangana amin'ny ady hamely ahy?"
12:4 Ary noho izany, miantso ny tenany ny lehilahy rehetra amin'ny Gileada, dia niady tamin'i Efraima. Ary ny lehilahy amin'ny Gileada namono Efraima, satria efa nanao hoe:, "Gileada dia mpandositra avy amin'ny Efraima, ary velona teo amin'ny Efraima sy Manase. "
12:5 Dia novonjen'ny Gileada ny fitàna any nibodo Jordana, niaraka izay Efraima dia hiverina. Ary raha misy olona avy amin'ny isan'ny Efraima tonga, nandositra, ka izay efa nolazain'i, "Miangavy aho fa avelao aho handeha,"Gileada dia hanao aminy hoe:, "Azonao ho Efraimita?"Ary raha hoy izy:, "Izaho dia tsy,"
12:6 mangataka aminy izy ireo, dia ataovy hoe: 'Shiboleta,'Izay adika hoe' tsofina-bary. 'Nefa havaliny' Sibboleth,'Tsy afaka maneho ny teny ho-tsofina-bary ao amin' ny taratasy. Ary niaraka tamin'izay dia apprehending azy, izy ireo hanapaka ny tendany, Mandritra izany fotoana fiampitàna Jordana. Ary amin 'izany andro Efraima, roa arivo amby efa-polo latsaka.
12:7 Ary Jefta dia, Gileadita, nitsara ny Isiraely enin-taona. Dia maty izy, ary nalevina tao an-tanànany tany Gileada.
12:8 Manarakaraka ireo dia, Ibzana, avy any Betlehema nitsara ny Isiraely.
12:9 Ary nanana zanakalahy telo-polo, ary toy izany koa ny vavy isan'ny, izay dia naniraka ho any homena ny lehilahy. Dia nanaiky ny vadiny ho an'ny zanaky ny mitovy isa, nitondra azy ireo tao an-tranony. Ary nitsara ny Isiraely fito taona.
12:10 Dia maty izy, dia nalevina tany Betlehema.
12:11 Manarakaraka ireo dia nandimby Elon, ny Zebolonita. Ary nitsara ny Isiraely folo taona.
12:12 Dia maty izy, dia nalevina tao Zebolona.
12:13 Manarakaraka ireo dia, Abdon, ny zanak'i Elela, avy any Piratona, nitsara ny Isiraely.
12:14 Ary nanana zanakalahy efa-polo, ary telo-polo avy amin'izy ireo zafikeliny, rehetra nitaingina boriky fito-polo tanora. Ary nitsara ny Isiraely valo taona.
12:15 Dia maty izy, ary dia nalevina tany Piratona, any amin'ny tanin'ny Efraima, an-tendrombohitra ny Amalekita.
13:1 Ary indray, ny Zanak'Isiraely nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Dia natolony teo an-tànan'ny Filistina efa-polo taona.
13:2 Ary nisy lehilahy anankiray avy tany Zora, sy ny tahiry Dana, Manoa no anarany, manana momba vady.
13:3 Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy, ka hoy Izy:: "Momba ianao ka tsy niteraka. Nefa hanan'anaka ianao ka hiteraka zazalahy.
13:4 Noho izany, Tandremo mba tsy hisotro divay na toaka. Ary aza mihinana zava-maloto.
13:5 Fa hanan'anaka ianao ka hiteraka zazalahy, izay tsy misy hareza lohany izay mikasika. Fa ho Nazirita 'Andriamanitra, amin'ny fahazazany sy ny avy amin'ny kibon-dreniny. Ary izy no hanomboka hanafaka ny Isiraely amin'ny tanan'ny Filistina. "
13:6 Ary rehefa nandeha ny vadiny, dia hoy izy taminy:: "Nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko, manana ny tarehy ny anjely, mahatahotra izaitsizy tokoa. Ary rehefa efa nanontany azy, iza izy, ary ho any amin'izay nitoerany avy, ary inona no anarany nantsoina, izy tsy nety lazao amiko.
13:7 Fa izy namaly: 'Indro, hanan'anaka ianao ka hiteraka zazalahy. Tandremo mba tsy hisotro divay na toaka. Ary ianao tsy manimba zava-maloto. Fa ny zaza dia ho Nazirita 'Andriamanitra amin'ny fahazazany, hatrany an-kibon-dreniny, na dia mandra-pahafatiny. '"
13:8 Ary Manoa ka nivavaka tamin'i Jehovah, ka hoy Izy:, "Miangavy anao aho Tompo, fa ny lehilahin'Andriamanitra, izay naniraka, mba hodiany indray, ary mba hampianatra anay ny tokony hatao momba ny zaza izay ho teraka. "
13:9 Ary Jehovah nihaino ny fivavaky ny Manoa, Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niseho indray ny vadiny, nipetraka tany an-tsaha. Fa Manoa vadiny tsy teo aminy. Ary nony efa nahita ilay Anjely,
13:10 Dia nampidininy faingana ny nihazakazaka vadiny. Ary izy nilaza taminy, nanao hoe:, "Indro, ilay lehilahy niseho tamiko, izay efa hitany teo aloha. "
13:11 Dia nitsangana izy ka nanaraka ny vadiny. Ary nandeha ho any amin'ny lehilahy, hoy izy taminy:, "Ianao ve ilay niteny ny vadiko?"Dia namaly, "Izaho dia."
13:12 Ary hoy izy taminy Manoa: "Rahoviana no ho tanteraka ny teninao. Inona no tianao ny zaza hanao? Na avy Inona no tokony hitandrina ny tenany izy?"
13:13 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah tamin'i Manoa: "Ny zavatra rehetra momba izay efa nolazaiko vadinao, izy tenany tokony hifady.
13:14 Ary aoka izy hihinana na inona na inona avy amin'ny voaloboka. Mety tsy hisotro divay na toaka izy. Haringako izy maloto na inona na inona. Ary dia aoka hotandremany sy hitandrina ny zavatra efa nampianarina azy. "
13:15 Ary hoy Manoa tamin'Ilay Anjelin'i Jehovah, "Masina Hianao, mamindrà manaiky izay angatahiko, ary aoka isika manomana zanak'osy amin'ny osy. "
13:16 Ary ilay anjely namaly azy: "Na dia nanery ahy, : Tsy hihinana aho amin'ny mofo. Fa raha vonona ny hanatitra ny fanatitra dorana, hanatitra azy ho an'i Jehovah. "Ary tsy nahalala Manoa fa Anjelin'i Jehovah.
13:17 Ary hoy izy taminy:, "Iza ny anaranao, amin'izay mba, Raha ny teny efa tanteraka, mba hanomezanay voninahitra Anao?"
13:18 Ary izy namaly azy, "Nahoana ianao no manontany ny anarako, izay ho fahagagana ny?"
13:19 Ary noho izany, Manoa naka ny zanak'osy amin'ny osy, ary ny fanatitra aidina momba, Ary napetrany teo ambonin'ny vatolampy, ho fanatitra ho an'i Jehovah, izay manatanteraka fahagagana. Avy eo izy sy ny vadiny nijery.
13:20 Ary raha ny lelafo avy teo amin'ny alitara niakatra tany an-danitra, Ilay Anjelin'i Jehovah niakatra teo anatin'ny lelafo. Ary rehefa Manoa mivady nahita izany, ka lavo tamin'ny tany mora.
13:21 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah intsony niseho taminy. Ary niaraka tamin'izay dia, Manoa fantany azy ho nisy anjelin'ny Tompo.
13:22 Ary hoy izy tamin'ny vadiny, "Tsy ho faty tokoa, satria efa nahita an'Andriamanitra. "
13:23 Ary namaly azy ny vadiny, "Raha ny Tompo naniry ny hamono antsika, dia tsy mba ho nanaiky ny fanatitra dorana sy ny fanatitra aidina momba avy amin'ny tanana. Dia tsy mba ho hiseho izany rehetra izany ho antsika, ary tsy ho izy nilaza taminay ny zavatra izay amin'ny ho avy. "
13:24 Ary toy izany koa niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataony hoe Samsona. Ary ny ankizilahy nihalehibe, ary ny Tompo nitso-drano azy.
13:25 Ary ny Fanahin 'ny Tompo dia nanomboka ho niaraka taminy tao amin'ny tobin'i Dana, eo Zo'rah sy Estaola.
14:1 Ary Samsona nidina nankany Timna. Ary fa mbola misy ny vehivavy avy amin'ny zanakavavin'ny Filistina,
14:2 dia niakatra teo, ary nilaza tamin-drainy aman-dreniny, nanao hoe:: "Aho ary nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanakavavin'ny Filistina. Izany no angatahako fa hitondra azy ho ahy ho vadiny. "
14:3 Ary ny ray aman-dreniny nanao taminy hoe:, "Moa tsy vehivavy va eto amin'ny zana-kavanao, na ato amin'ny firesako rehetra, mba ho vonona ny maka vady avy amin'ny Filistina, izay tsy voafora?"Ary hoy Samsona tamin-drainy: "Raiso ity vehivavy ho ahy. Fa izy no tiany masoko. "
14:4 Ary ny ray aman-dreniny dia tsy mahalala fa ny raharaha natao 'ny Tompo, ary satria nitady izay hiadiany tamin'ny Filistina Izy. Fa tamin'izany andro izany, ny Filistina no nanapaka ny Isiraely.
14:5 Ary noho izany, Nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nankany Timna. Ary nony efa tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany an-tanàna, dia nahita liona tanora, Savage sy mierona, ary nifanena taminy.
14:6 Ary ny Fanahin 'ny Tompo niroatra Samsona, ary nandriatra mitokana ny liona, toy ny zanak'osy ho rovitra ho tapa, manana na inona na inona teny an-tànany. Ary tsy vonona ny hanambara izany amin'ny rainy aman-dreniny.
14:7 Dia nidina izy ka niresaka tamin-dravehivavy izay sitraky ny masony.
14:8 Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, niverina tany hanambady azy, dia nivily ka dia mba hizaha ny fatin'ilay liona. Ary indro, nisy reni-tantely nivangongo eo am-bavan'ny liona, amin'ny toho-tantely.
14:9 Ary rehefa nandray izany teny an-tànany, dia nihinana izany teny an-dalana. Ary tonga ny rainy aman-dreniny, dia nomeny azy ireo ny anjara, ary izy ireo koa dia nihinana izany. Nefa tsy hampiharihariana ny Ray ho azy ireo fa efa naka ny tantely avy amin'ny fatin'ilay liona.
14:10 Ary toy izany koa ny rainy nidina ho any amin'ny vehivavy, ary dia nanao fanasana ho an'ny zanany lahy Samson. Fa toy izany ny tovolahy dia zatra nanao.
14:11 Ary raha ny olom-pirenena ny tompon-tany efa nahita azy, dia nanolotra zavatra ho Azy namana telo-polo lahy hitoetra ao aminy.
14:12 Ary hoy Samsona taminy:: "Izaho no soso-kevitra aminao ny olana, izay, raha afaka mamaha izany ho ahy ao anatin'ny fito andro ny andro firavoravoana, Izaho no hanome anareo lobaka telo-polo sy ny toy izany koa ny isan'ny mitondra akanjo.
14:13 Fa raha tsy afaka hamahana izany, no homenareo lobaka telo-polo sy ny ahy toy izany koa ny isan'ny akanjo lava. "Ary ireo namaly azy, "Soso-kevitra ny olana, dia mba handre izany. "
14:14 Ary hoy Izy taminy:, "Sakafo nivoaka avy izay mihinana, ary mamy nivoaka avy izay mahery. "Ary izy ireo tsy afaka hamaha ny Tolo-kevitra amin'ny telo andro.
14:15 Ary rehefa tonga ny andro fahafito, dia hoy izy tamin'ny vadin'i Samsona: "Mampirisika ny vadinao, ary mandresy lahatra azy mba hanambara aminao izay naroso dia midika hoe. Fa raha tsy vonona ny hanao izany, dia handoro anao sy ny ankohonan-drainao. Ianao, ary efa niantso anay ho any amin'ny fampakaram-bady, mba handroba antsika?"
14:16 Dia nitomany teo anatrehan'i Samsona, ary izy nitaraina, nanao hoe:: "Tsy mankahala ahy, ary ianao tsy tia ahy. Izany no antony tsy atao ny manazava amiko ny olana, izay efa nanolo-kevitra ny zanaky ny fireneko. "Fa izy namaly: "Dia tsy vonona ny hanambara izany ny raiko sy ny reniko. Ary noho izany, ahoana no ahafahako manambara izany aminao?"
14:17 Noho izany, nitomany teo anatrehany mandritra ny andro fito amin'ny andro firavoravoana. Ary ela, amin'ny andro fahafito, satria izy efa mampalahelo azy, izy nanazava izany. Ary niaraka tamin'izay izy nanambara azy an-tanindrazana.
14:18 ary izy ireo, amin'ny andro fahafito, mbola maty ny masoandro nihena, hoy izy taminy:: "Inona no mamy noho ny tantely? Ary inona no mahery noho ny liona?"Ary hoy Izy taminy:, "Raha tsy nampiasa ny ombivavikeliko, ianao, dia tsy mba misaron-kevitra aho. "
14:19 Ary noho izany ny Fanahin 'ny Tompo azy niroatra, ka dia nidina nankany Askelona, ary amin 'izany toerana dia namono telo-polo lahy. Ary ny fanesorana ny fitafiany, dia nomeny azy ireo ho an'ireo izay efa voavaha ny olana. Ary satria very tezitra, dia niakatra ho any an-tranon'ny rainy.
14:20 Dia naka ny vadiny tahaka ny lehilahy iray tamin'ireo namany sy ny fampakaram-bady namany.
15:1 Avy eo, rehefa afaka fotoana, rehefa tapitra ny andro fijinjana ny vary teo akaiky, Samsona tonga, nikasa hitsidika ny vadiny, ary izy nitondra azy zanak'osy avy amin'ny osy. Ary raha te-hiditra ny efitrano fandriany, toy ny mahazatra, rainy voarara azy, nanao hoe::
15:2 "Nihevitra aho fa ianao no mankahala azy, ary noho izany dia nomeko ho an'ny namanao. Fa izy kosa rahavavy, izay tanora sy tsara tarehy kokoa noho izy. Ary izy Mety ho vady ho anao, fa tsy ny azy. "
15:3 Dia hoy Samsona namaly ka nanao taminy: "Avy androany, tsy hisy heloka ho ahy hisakana ny Filistina. Fa manisy ratsy rehetra izao. "
15:4 Dia nivoaka izy ka nisambotra amboahaolo telon-jato. Ary niaraka tamin'izy ireo ny rambon'ny. Dia nafehiny teo anelanelan'ny rambony ilay hatao fanilo fanilo.
15:5 Sy mametraka izany ao amin'ny afo, dia nalefany izy ireo, ka mba maimaika ny toerana. Ary niaraka tamin'izay dia niditra tao an-tanimbary ny Filistina, ny fametrahana ireo ao amin'ny afo, na ny vary izay efa voafehy noho ny nitondra, ary inona no mbola nitsangana teo amin'ny tahony. Izao no nandoro tanteraka, loatra ka ny lelafo lany ringana koa na dia ny voaloboka sy ny sahan'oliva.
15:6 Ary hoy ny Filistina:, "Iza re no nanao izany zavatra izany?"Ary voalaza hoe:: "Samsona, zanak'i-in-lalàna ny amin'ny Timnite, satria nanaisotra ny vadiny, ary nomeny an'i hafa. Nataony izany. "Dia niakatra ny Filistina ka nandoro ny vehivavy ary koa ny rainy.
15:7 Ary hoy Samsona taminy:, "Na dia efa nanao izany, Dia mbola hanatanteraka famaliana hamely anao, ary dia ho nampionona. "
15:8 Ary namely azy raha be no maty, loatra ka, amin'ny fahaverezan-kevitra Aho, napetrany ny ombilahy kely hatao ny tongotro eo amin'ny feny. ary midina, dia nitoetra tao an-johy ny harambato mitresaka any Etama amin'ny.
15:9 Ary toy izany ny Filistina, niakatra ho any amin'ny tanin'ny Joda,, nanao toby eo amin'ny fitoerana izay taty aoriana nantsoina hoe 'i Lehia, izany hoe, ilay valanoranom-boriky, any ny tafika namelatra.
15:10 Ary ny sasany avy amin'ny fokon'i Joda nanao taminy, "Nahoana ianao no niakatra hamely anay?"Dia namaly, "Efa tonga izy Hamatotra an'i Samsona, ary mba hamaly azy noho izay nataony ho antsika. "
15:11 Dia ny lehilahy telo arivo amin'ny Joda dia nidina ho any amin'ny lava-bato ny harambato mitresaka any Etama amin'ny. Ary hoy koa izy tamin'i Samsona: "Tsy fantatrareo va fa ny Filistina no manapaka anay? Nahoana no te-hanao izany?"Ary hoy Izy taminy:, "Toy izay efa nataony tamiko, noho izany dia efa nanao ho azy ireo. "
15:12 Ary hoy izy ireo taminy, "Efa tonga Hamatotra anao, sy hanafaka anao eo an-tànan'ny Filistina. "Dia hoy Samsona taminy:, "Mianiana ary mampanantena ny amiko ary fa tsy hamono ahy."
15:13 Hoy izy ireo: "Tsy hamono anao. Fa aoka ihany hisy hamonjy anao mifatotra. "Dia namatotra azy tamin'ny mahazaka roa vaovao. Ary izy ireo naka azy avy tany harambato mitresaka any Etama amin'ny.
15:14 Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana ilay valanoranom-boriky, ary ny Filistina, niantso mafy, dia nitsena azy, ny Fanahin 'ny Tompo azy niroatra. Ary toy ny rongony izay matetika levon'ny afo ny Soso-kevitra, tamin'izay ny fifandraisana izay efa nafatotra torotoro, ary nafahana.
15:15 Ary nahita valanoranom-boriky teny izay nametra teo, izany hoe, ny valanoranom-boriky, snatching azy, namono arivo lahy izany.
15:16 Ary hoy izy:, "Tamin'ny valanoranom-boriky, Tamin'ny valanoranom ny zana-boriky ny boriky, I nosimbana, ary efa namono arivo lahy. "
15:17 Ary nony efa nahavita ireo teny ireo, fihirana, dia natontany ny valanoranom-boriky teny an-tànany avy. Ary ny anaran'izany tany izany hoe Ramata-Lehia, izay nadika hoe 'ny isam-ponina ny valanoranom-boriky teny.'
15:18 Ary rehefa tena mangetaheta, dia nitaraina tamin'i Jehovah, ka hoy Izy:: "Hianao no nanome, eo an-tànan'ny mpanomponao, izao famonjena lehibe indrindra sy ny fandresena. Fa jereo fa ho faty aho ny hetaheta, ary noho izany dia ho latsaka eo an-tànan'ny tsy mifora. "
15:19 Ary toy izany ny Tompo nanokatra nify lehibe iray tao an-valanoranom-boriky, sy rano nivoaka avy aminy. Ary rehefa nisotro izany, ny fanahiny dia velona indray, dia sitrana izy ny heriny. Izany no antony, ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe 'ny Lohataona antsoina hoe avy ilay valanoranom-boriky,'Na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
15:20 Ary nitsara ny Isiraely, tamin 'ny andron' ny Filistina, roa-polo taona.
16:1 Koa izy niditra tao Gaza. Ary izy nahita vehivavy janga vehivavy, dia niditra tao aminy.
16:2 Ary nony efa azon'ny Filistina efa nandre izany, Ary efa fantatra ao aminy, fa Samsona efa niditra tao an-tanàna, dia nanodidina azy, mametraka mpiambina eo amin'ny vavahadin'ny tanàna. Ary izy ireo niambina nandritra ny alina mangina, amin'izay mba, amin'ny maraina, izay hamonoany an'i Jesosy araka izay efa nivoaka.
16:3 Fa nandry Samsona mandra-mamatonalina, Ary nitsangana avy teo, dia nalainy varavarana roa avy am-bavahady, ny Lahatsoratra mihidy. Ary nametra azy ireo eo an-damosiny, izy no nitondra azy ho any an-tampon'ny tendrombohitra izay manatrika Hebrona.
16:4 Rehefa afaka izany,, dia tia vehivavy, izay nonina tany an-dohasaha ny Sorek. Dia natao hoe Delila.
16:5 Ary ny mpitarika ny Filistina dia azy, ka hoy izy:: "Mamita azy, ary hianatra avy aminy izay lainga ny haben'ny heriny, sy ny fomba mety ho afaka mandresy azy sy hametraka voahazona Azy. Ary raha manao izany, tsirairay amintsika hanome anareo zavatra iray volafotsy zato amby arivo vola madinika. "
16:6 Noho izany, Hoy Delila tamin'i Samsona, "Teneno aho, Miangavy anao aho, izay lainga ny hery lehibe indrindra, ary inona no mety mamatotra, mba tsy hiala?"
16:7 Dia hoy Samsona namaly ka nanao taminy, "Raha tiako hitoetra hamatotra ary tamin'ny fito tady, vita amin'ny ozatra tsy mbola maina, fa mbola mando, Aho, dia ho osa tahaka ny olona sasany. "
16:8 Ary ireo andrianan'ny Filistina nitondra tady fito taminy, toy ny efa voalaza. Dia namatotra azy tamin'ny ireo.
16:9 Ary noho izany, izay niafina tao otrika taminy, ao amin'ny efitra fatoriana, dia niandry ny faran'izany zavatra izany. Dia niantso azy, "Ny Filistina Hamely anao, Samson!"Ary notosany ny tady, tahaka ny hisy hotapahiny ny kofehy rongony, Nandika vilana ny fanapahana sy ny singed amin'ny afo. Ary dia toy izany no tsy fantatra izay hametraka ny heriny.
16:10 Ary hoy Delila tamin'i azy: "Indro, efa namitaka ahy ianao, ary izay nolazainao ny zavatra diso. Fa, fara fahakeliny, izao, lazao amiko izay mety mamatotra anao. "
16:11 Ary izy namaly ka nanao taminy, "Raha tiako hitoetra hamatotra ary tamin'ny tady vaovao, izay tsy mbola nampiasaina, Izaho ho malemy sy tahaka ny olona sasany. "
16:12 Indray, Delila namatotra azy ireo, ary izy niantso, "Ny Filistina Hamely anao, Samson!"Fa nisy otrika efa namboarina teo amin'ny efitra fatoriana. Fa nanapaka ny bindings toy ny filaments ny tranonkala.
16:13 Ary Delila niteny taminy indray: "Mandra-pahoviana no hamitaka ahy ka lazao amiko lainga? Hita amin'ny izay tokony hofehezina. "Dia hoy Samsona namaly azy, "Raha manenona ny foto-bolo fito amin'ny lohako ny haraka, ary raha mamatotra ireo manodidina ny lalamby, ary nanamboatra izany tamin'ny tany, Izaho ho malemy. "
16:14 Ary rehefa nanao izany Delila, dia hoy izy taminy:, "Ny Filistina Hamely anao, Samsona. "Ary hitsangana avy amin'ny torimaso, dia lasa ny lalamby tamin'ny volon sy ny fanenomana.
16:15 Ary hoy Delila tamin'i azy: "Ahoana no milaza fa tia ahy ianao, rehefa ny fanahinao tsy amiko tsinona? Efa nandainga tamiko tamin'ny fotoana telo, ary ianareo dia tsy hampiharihariana ny Ray izay lainga ny hery lehibe indrindra. "
16:16 Ary rehefa efa tena manahirana ho azy, ary ny andro maro dia nijanona teo akaiky teo mandrakariva, Tsy manome azy ny andro fitsaharana, reraka ny fanahiny, ary izy dia reraka, na dia ho amin'ny fahafatesana.
16:17 Dia Nampahafantatra ny fahamarinan 'ny zavatra, dia nanao taminy hoe:: "Ny vy tsy mbola mby manerana ny lohako, aho, fa mbola Nazirita, izany hoe, Efa natokana ho an'Andriamanitra hatrany an-kibon'ineny. Raha ny lohako dia hiharatra, ny heriko dia hiala amiko, ary Izaho ho reraka sy ho tahaka ny olona sasany. "
16:18 Avy eo, nahita fa efa niaiky taminy ny fanahiny manontolo, dia naniraka ho any amin'ny mpitarika ny Filistina sy nandidy: "Miakara fotsiny indray. Fa ankehitriny efa nanokatra ny fony ho ahy. "Dia niakatra, nitondra azy ny vola izay efa nampanantenaina.
16:19 Fa izy an'i Samsona hatory teo ny lohalika, mandry ilika ny lohany teo-tratrany. Ary Hagara nanao ny mpanety, ary nanaratra ny foto-bolo fito amin'ny volo. Dia nanomboka hanosika azy, sy nanohitra azy avy amin'ny tenany. Fa avy hatrany ny hery niala taminy.
16:20 Ary hoy izy:, "Ny Filistina Hamely anao, Samson!"Ary nifoha avy amin'ny torimaso, dia hoy izy tao an-tsainy, "Dia hotapahiko hiala ka hampihorohoroiko ny tenako malalaka, toy ny nataoko taloha. "Fa tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy.
16:21 Ary nony efa azon'ny Filistina efa nisambotra azy, izy ireo avy hatrany ny masony nosarihana. Ka nitondra an'i Jesosy, nofatorana tamin'ny rojo, ho any Gaza. Ary hihodidina azy tao am-ponja, dia nahatonga azy hiasa vato fikosoham-bary.
16:22 Ary ankehitriny ny volo nanomboka naniry indray.
16:23 Ary ny mpitarika ny Filistina nivory ho iray, mba hahazoany manolotra zavatra betsaka hatao fanatitra ho an'i Dagona, andriamaniny. Ary feasted, nanao hoe:, "Ny andriamanitsika Efa namonjy ny fahavalo, Samson, eo an-tanantsika. "
16:24 Avy eo, koa, ny olona, nahita izany, nidera ny andriamaniny, ka hoy izy: toy izany koa, "Ny Andriamanitra efa namonjy ny fahavalo an-tanantsika: ny izay nanimba ny tany sy namono dia maro indrindra. "
16:25 Ary ny fifaliantsika amin'ny ny fankalazana, manana izao naka sakafo, Samsona dia nandidy fa hatao hoe, ary, raha tonga fihomehezana teo anoloany. Sy rehefa nentina tany am-ponja, dia naneso teo anatrehany Izy,. Ary nampandeha azy nitsangana teo anelanelan'ny andry roa.
16:26 Ary hoy izy ny zaza izay mitarika ny diany, "Avelao aho hikasika ireo andry, izay manohana ny trano iray manontolo, ary miankina aminy, ka mba hiandry kely. "
16:27 Ary ny trano feno lehilahy sy vehivavy. Ary ny mpitarika ny Filistina dia teo, ary koa olona tokony ho telo arivo, ny na lahy na vavy, an-tampon-trano ambony sy ny haavon'ny-trano, izay nijery an'i Samsona rehefa naneso.
16:28 Avy eo, miantso ny Tompo, hoy izy:, "Jehovah Tompo ô tsarovy aho, ary hamerina amiko ankehitriny ry hery taloha, O Andriamanitro, ka mba hampanodiaviko ny tenako hamely ny fahavaloko, ary mba hahazoako mandray iray famaliana noho ny tsy fahampian'ny zavatra ilain'ireo anankiray amin'ny masoko roa. "
16:29 Ary mihazona ny roa ny andry, izay nanohana ny trano, ary mitana anankiray tamin'ny tanany ankavanana, ary ny anankiray tamin'ny tànany ankavia,
16:30 hoy izy:, "Enga anie ny fiainako hiara-maty amin'ny Filistina." Ary rehefa nihozongozona ny andry mafy, ny trano dia nilatsaka tamin'izay rehetra ny mpitarika, ary ny sisa tamin'ny vahoaka izay teo. Ary izy namono olona maro kokoa Izy, rehefa novonoina noho izy hovonoina eo anatrehan'i eo amin'ny fiainany.
16:31 Ary hoy ny rahalahiny mbamin'ny mpianakaviny rehetra, midina, naka ny fatiny, ary dia nandevina azy teo anelanelan'i Zora sy Estaola, in halevina handimby an-drainy, Manoa. Dia nitsara ny Isiraely roa-polo taona.
17:1 Amin'izany andro izany, nisy lehilahy anankiray, avy any amin'ny tany havoan'i Efraima, atao hoe Mika.
17:2 Ary hoy izy tamin-dreniny, "Ny arivo vola madinika volafotsy zato, izay efa nisaraka ho anao, ary momba izay efa nianiana tany reko, indro, I asaivo, ary izy no amiko. "Dia hoy izy namaly azy hoe:, "Anaka Nahazo fitahiana avy amin'ny Tompo."
17:3 Noho izany, dia naveriny tao amin'ny reniny. Ary hoy izy taminy: "Izaho efa nanokana ary nivoady volafotsy izany ho an'ny Tompo, mba zanako hahazo izany avy amin'ny tanako, ary mety ho an-idina sampy sy ny sarin-javatra voasokitra. Ary ankehitriny dia hanolotra azy ho anao. "
17:4 Ary rehefa naveriny tamin-dreniny ireo, dia naka roan-jato amin'ny vola madinika volafotsy, ary nomeny ny mpanefy volafotsy, ka mba ho avy amin'izy ireo sampy an-idina, ary ny sarin-javatra voasokitra. Ary efa mby tao an-tranon'i Mika.
17:5 Ary izy koa dia tafasaraka tamin'ny kely andriamanitra toerana masina ho an'ny. Ary nanao efoda sy ny theraphim, izany hoe, ny mpisorona sy ny sampy akanjo. Ary nameno ny tànan'ny anankiray izay zanany lahy, ka dia tonga mpisorony.
17:6 Ary tamin'izany andro izany, tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely. Fa tsy, samy nanao izay toa tsara ho an'ny tenany.
17:7 koa, dia nisy zatovo, avy any Betlehema any Joda, iray amin'ireo havany. Ary izy kosa dia Levita, ka dia monina ao.
17:8 Avy eo, miala avy ao an-tanànan'i Betlehema, dia naniry hivahiny na taiza na taiza no mahita izany mahasoa ny tenany. Ary rehefa tonga tany amin'ny tany havoan'i Efraima, raha manao ilay dia, koa izy nivily kely mbola any an-tranon'i Mika.
17:9 Ary Izy nanontany aminy hoe avy aiza. Dia namaly: "Izaho Levita avy any Betlehema any Joda. Ary nandeha aho ka mba ho velona izay afaka aho, raha ho fantany ho mahasoa ahy. "
17:10 Ary hoy Mika: "Stay with me. Ary ho amiko tahaka ny ray aman-dreny sy ny mpisorona. Ary homeko ho anao, isan-taona, vola madinika volafotsy folo, ary ny roa sosona akanjo, ary na inona na inona fepetra ilaina. "
17:11 nanaiky, ary dia nitoetra tao amin-dralehilahy. Ary izy ho azy toy ny zanany izy.
17:12 Ary Mika nameno ny tanany, ary nanana ilay tovolahy niaraka taminy ho mpisorony,
17:13 nanao hoe:: "Ankehitriny dia fantatro fa Andriamanitra dia ho soa ho ahy, satria manana mpisorona avy amin'ny taranaky ny Levita. "
18:1 Ary tamin'izany andro izany, tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely. Dia vao ny firenen'i Dana nitady zara-tany ho an'ny tenany, ka dia ho velona ao. Fa na dia izany andro izany, izy ireo tsy mbola nahazo ny loka teo amin'ny foko hafa.
18:2 Noho izany, ny taranak'i Dana naniraka dimy lahy matanjaka indrindra, ny tahiry sy ny fianakaviana, avy tany Zora sy Estaola, ka dia mba hisafo ny tany sy amim-pahazotoana-maso azy. Dia hoy izy taminy, "Mandehana, ka mba diniho ny tany. "Ary rehefa avy nandeha, dia tonga tany amin'ny tany havoan'i Efraima, ka dia niditra tao an-tranon'i Mika. Tsy dia nitsahatra ihany izy.
18:3 Ka nahalala ny teny ny tanora ary Levita. Ary raha mampiasa amin'ny tranom-bahiny niaraka taminy, hoy ireo taminy:: "Iza no nitondra anao eto? Inona no ataonao aty? Nahoana no te ho avy eto?"
18:4 Ary Izy namaly azy, "Mika efa nanolotra ahy zavatra iray ary ny iray hafa, ary Izy efa vola ahy ny karama, ka mba ho ny mpisorona. "
18:5 Avy eo izy ireo dia niangavy azy mba hanontany ny Tompo, ka mba ho afaka mba hahafantarany na ny dia nanaiky izy ireo fa ho karena, ary na ny raharaha ho vanona.
18:6 Dia namaly azy ireo, "Mandehana soa aman-tsara. Ny Tompo dia mijery fankasitrahana eo amin'ny lalana, sy ny dia izay no efa nanoratra. "
18:7 Ary toy izany koa ny dimy lahy, mandeha, tonga tany Laisy. Ary nahita ny vahoaka, monina ao aminy tsy misy tahotra, araka ny fanao amin'ny Sidoniana, azo antoka sy milamina, Zara raha manana na iza na iza mba hanohitra azy ireo, ary be harena, sy ny fiainana manokana, lavitra an'i Sidona izany, ary amin'ny olona rehetra.
18:8 Ary izy ireo niverina ho any amin'ny rahalahiny any Zora sy Estaola, izay nanontany azy, dia izay efa nataony. Ary izy ireo namaly:
18:9 "Mitsangàna. Aoka isika hiakatra ho azy ireo. Fa efa nahita ny tany dia tena nanan-karena sy mamokatra. Aza mangataka andro; tsy hanajanona. Andeha isika ka handova azy. Tsy hisy olana.
18:10 Tsy hiditra ho an'ireo izay mipetraka tsy manana ahiahy, ao amin'ny faritra tena malalaka, ary ny Tompo no hanolotra ny toerana ho antsika, toerana izay tsy misy na inona na inona izay tsy maniry eny ambonin'ny tany. "
18:11 Ary noho izany, ireo mety ho havan'ny Dan niainga, izany hoe, enin-jato lahy avy tany Zora sy Estaola, ary nisalotra ny fitaovam-piadiana.
18:12 Ary nony niakatra, dia nitoetra tany Kiriata-jearima any Joda. Ary toy izany koa ny toerana, hatramin'ny fahiny, nandray ny anarana ny tobin'i Dana, ary izany dia ao ambadiky ny indray Kiriata-jearima.
18:13 avy teo, dia nita amin'ny tany havoan'i Efraima. Ary nony efa tonga tao an-tranon'i Mika,
18:14 izy dimy lahy, izay eo anatrehan'i nalefa mba handinika ny tany Laisy, nanao tamin'ny rahalahiny sisa: "Fantatrareo fa ato amin'ireto trano ireto misy efoda sy ny theraphim, ary an-idina sampy sy ny sarin-javatra voasokitra. Diniho izay izany mba hahafaly anao hanao. "
18:15 Ary nony efa nivily kely, dia niditra tao an-tranon'i ny Levita tanora, izay tao an-tranon'i Mika. Ary dia niarahaba Azy tamin'ny teny milamina.
18:16 Ary ny enin-jato lahy, izay rehetra fitaovam-piadiana, dia nitsangana teo anoloan'ny varavarana.
18:17 Fa ireo izay efa niditra tao an-trano ny tanora niezaka mba hanaisotra ny sarin-javatra voasokitra, ary ny efoda, ary ny theraphim, ary ny sampy anidina. Fa ny mpisorona nijoro teo anoloan'ny ny varavarana, mbamin'ny enin-jato lahy mahery dia mahery lavitra tsy miandry.
18:18 Ary noho izany, ireo izay niditra naka ny sarin-javatra voasokitra, ny efoda, ary ny theraphim, ary ny sampy anidina. Ary ny mpisorona nanao taminy hoe:, "Manao inona ianao?"
18:19 Dia namaly azy: "Mangìna, ary hametraka ny rantsan ny vavanao. Ary niaraka taminay, ka dia mba manana anareo toy ny ray ary koa ny mpisorona. Fa iza moa no tsara ho anareo:: mba ho mpisorona ao an-tranon'ny lehilahy iray, na amin'ny firenena iray sy ny fianakaviana amin'ny Isiraely?"
18:20 Ary rehefa nandre izany, Dia nanaiky ny teniny. Ary nalainy ny efoda, ary ny andriamani-tsi-, ary ny sarin-javatra voasokitra, Ary niainga aminy.
18:21 Ary raha nandeha, efa naniraka ny ankizy ihany koa, ary ny biby fiompy, sy izay rehetra tao sarobidy mba hialoha azy ireo.
18:22 Ary raha mbola lavitra ny tranon'i Mika, ny olona izay nonina tany an-trano Mika, niantso mafy miara-, nanaraka azy ireo.
18:23 Ary nanomboka niantsoantso teo ivohony. Ary nony nijery indray, hoy koa izy tamin'i Mika: "Inona no tadiavinao? Nahoana no niantso?"
18:24 Dia namaly: "Efa nesorina ny andriamanitro, izay nataoko ho an'ny tenako, ary ny mpisorona, ary izay rehetra ananako. Ary no lazainao, 'Inona moa no tianao?'"
18:25 Ary ny zanakalahin'i Dana hoy izy taminy, "Tandremo mba tsy miresaka amintsika, raha tsy izany dia ny olona amin'ny saina ny herisetra mety hanafotra anao, ary ianao dia ho very mbamin'ny trano rehetra. "
18:26 Ary noho izany, izy ireo nanohy ny dia izay efa nanomboka. fa Mika, satria izy ireo mahery noho izy, niverina tany an-tranony.
18:27 Ary ny enin-jato lahy naka ny mpisorona, ary ny zavatra izay voalaza etsy ambony, ary izy ireo nankany Laisy, any amin'ny olona mandry fahizay ka tsy manana ahiahy, dia namely azy teo tamin'ny lelan-tsabatra. Ary nodorany tamin'ny afo ny tanàna.
18:28 Fa tsy misy olona mihitsy naniraka fanampin-kery, satria nipetraka lavitra an'i Sidona izany, ary tsy nisy fikambanana na draharaha tamin'olona akory izy. Ary ny tanàna dia toerana any amin'ny faritra Rehoba. Ary fanorenana izany indray, dia nonina tao,
18:29 miantso ny anaran'ny tanàna Dan, araka ny anaran-drainy, izay naterak'i Israely, na dia eo anoloany atao hoe Laisy.
18:30 Ary nanorina ho azy ny sarin-javatra voasokitra. ary Jonatana, ny zanak'i Gersoma, ny zanak'i Mosesy, sy ny zanany, no mpisorona ao amin'ny fokon'i Dana, na dia mandra-pahatongan'ny andro izay nahababo.
18:31 Ary ny sampy Mika nitoetra tamin'izy ireo nandritra ny fotoana iray manontolo ny tranon'Andriamanitra tao Silo. Ary tamin'izany andro izany, tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely.
19:1 Ary nisy lehilahy anankiray, ny Levita, velona afa-tsy amin'ny tany havoan'i Efraima, nampaka-bady avy any Betlehema any Joda.
19:2 Nandao azy, dia niverina tany an-tranon-drainy tany Betlehema. Dia nitoetra tao aminy nandritra ny efa-bolana.
19:3 Ary io vadiny io nanaraka azy, te-hihavana taminy, ary niresaka tsara fanahy taminy, ary mba hitarika azy niverina niaraka taminy. Ary nanana niaraka taminy mpanompo sy boriky roa. Ary izy nandray azy, dia nitondra azy ho ao an-tranon-drainy. Ary rehefa ny rainy-in-lalàna no nandre momba izany, ary efa nahita azy, dia nifanena taminy tamim-pifaliana.
19:4 Ary nanaiky ilay lehilahy. Ary ny zanak'i-in-lalàna nitoetra tao an-tranon-drainy-in-lalàna nandritra ny telo andro, nihinana sy nisotro niaraka taminy tao amin'ny fomba namana.
19:5 Fa tamin'ny andro fahefatra, handehananareo amin'ny alina, dia nikasa ny hametraka avy. Fa ny rainy kosa-in-lalàna nandray azy, ka hoy izy taminy:, "Hanandrana kely aloha mofo, sy manamafy orina ny vavony, ary avy eo dia niainga. "
19:6 Dia nipetraka niara-, ka dia nihinana sy nisotro. Ary ny rain-zatovovavy hoy zanany-in-lalàna, "Mangataka anareo aho mba hijanona eto androany, ka dia mba hiara-mifaly. '
19:7 Fa nifoha, dia nikasa ny hanomboka niainga. fa kanefa, ny rainy-in-lalàna nanery azy tapa-kevitra, ka nampanjaka azy hitoetra aminy.
19:8 Ary nony maraina dia tonga, Levita no nanomana ny diany. Ary ny rainy-in-lalàna hoy izy taminy indray, "Masina Hianao, mamindrà kely sakafo, ary mba ho hery, mandra-mazava mitombo, ary rehefa afaka izany,, dia niainga. "Koa, dia niara-nihinana.
19:9 Ka dia nitsangana, ka dia mba nandeha niaraka tamin'ny vadiny sy ny mpanompony. Ary ny rainy-in-lalàna niteny taminy indray: "Eritrereto fa ny mazava no fihenan'ny, Ary manatona ho hariva. Mitoera niaraka tamiko koa ankehitriny, ary mandany ny andro firavoravoana. Ary rahampitso dia niainga, mba modia any an-tranony. "
19:10 Zanany lahy-in-lalàna dia tsy vonona ny hanaiky ny teniny. Fa tsy, avy hatrany izy nanohy, Ary tonga tandrifin'i Jebosa, izay kosa dia homeny anaram atao hoe Jerosalema, nitondra ampondra roa niaraka taminy nitondra enta-mavesatra, ary ny vadiny.
19:11 Ary ankehitriny akaikin'i Jebosa izy ireo, fa ny andro no nivadika ho alina. Ary hoy ilay mpanompo tamin'ny tompony, "Avia, Miangavy anao aho, dia aoka isika hivily ho any an-tanànan 'ny Jebosita,, mba hahafahantsika mitoetra eo aminy. "
19:12 Ny tompony namaly azy: "Tsy hiditra ao an-tanàna ny any amin'ny firenena hafa, izay tsy avy amin'ny Zanak'Isiraely. Fa tsy, Dia hiampita hatrany Gibea.
19:13 Ary rehefa ho efa tonga tany, dia handry any amin'io toerana io, na, fara fahakeliny, tao an-tanànan'i Rama. "
19:14 Noho izany, -nandroso Jebosa, ary mitohy amin'ny, dia nanaiky ilay dia. Fa ny masoandro dia nidina azy raha mbola akaikin'i Gibea, izay avy amin'ny fokon'i Benjamina.
19:15 Koa araka izany ny navily ho azy, ka mba handry any. Ary nony efa niditra, dia nipetraka teo an-kianjan'ny tanana. Fa tsy nisy olona vonona ny hanome azy ireo fahaiza-mandray vahiny.
19:16 Ary indro, dia nahita lehilahy antitra, rehefa niverina avy tany an-tsaha sy ny asany ao amin'ny hariva, ary izy koa dia avy any amin'ny tany havoan'i Efraima, ary nitoetra toy ny vahiny amin'ny Gibea. Fa ny olona teo amin'ny faritra nisy avy amin'ny taranak'i Benjamina.
19:17 Ary ilay lahy antitra, nanopy ny masony, nahita ilay lehilahy nipetraka teo amin'ny amboara eny an-dalambe tao an-tanàna. Ary hoy izy taminy:: "Taiza ianao avy? Ary ho aiza ianao?"
19:18 Ary izy namaly azy: "Tsy niala Betlehema any Joda, ary mandeha mankany amin 'ny toerana, izay eo anilan'i havoan'i Efraima. Avy tao izahay dia nankany Betlehema, Ary ankehitriny isika dia handeha ho any an-tranon'Andriamanitra. Kanefa tsy misy olona vonona ny handray antsika ambany tafon-tranoko.
19:19 Manana mololo sy ny mololo toy ny sakafo ho an'ny borikiny, ary manana mofo sy ny divay ho an'ny fampiasana ny tenako, sy ny ankizivavinao sy ny mpanompo Izay momba ahy. Na inona na inona afa-tsy izahay tsy manam-trano nitoerany. "
19:20 Ary ilay lehilahy anti-panahy namaly azy: "Fiadanana ho anareo. Dia hanome izay rehetra ilaina. ihany, Miangavy anao aho, Tsy mijanona eto an-kianja. "
19:21 Dia nitondra azy tao an-tranony, ka nanome sakafo ho an'ny borikiny. Ary rehefa voasasany ny tongony, Izy nandray azy amin'ny fanasana.
19:22 Ary raha mbola nihinana izy, nisotro, ka mamelombelona ny tenany amin'ny sakafo sy zava-pisotro araka ny asa ny ny dia, ny mponina tao amin'izany tanàna izany, ny tena ratsy fanahy (izany hoe, tsy misy zioga), ka nanodidina ilay lahy antitra an-tranon'ny. Ary nanomboka trano mandondòna ny varavarana, miantso ny tompon-trano, ary nanao hoe:, "Avoahy ny lehilahy izay niditra an-tranonao, ka mba hanararaotra azy. "
19:23 Ary ny lehilahy anti-panahy nivoaka nankeo aminy, ka hoy Izy:: "Aza misafidy, rahalahy, dia aza misafidy ny hanao izany ratsy. Fa io lehilahy io dia niditra ho ahy nandray vahiny. Ary tsy maintsy hitsahatra izany hadalana.
19:24 Manana zanakavavy virijina, ary izany olona manana vady. No hitondrako azy mivoaka ho eto aminareo, mba manamaivana azy ireo ary mety hahafa-po ny filan'ny. ihany, Miangavy anao aho, tsy nanao izany ratsy izany heloka bevava manohitra ny natiora eo amin'ny olona. "
19:25 Fa izy ireo tsy vonona ny hanaiky ny teniny. Toy izany koa ny lehilahy, mamantatra izany, nitondra avy ny vadiny ho azy ireo, ka dia natolony azy ny fanararaotana ara-nofo. Ary rehefa ditra taminy ny alina manontolo, dia namoaka azy nony maraina.
19:26 Fa ny vehivavy, toy-pito no teo receding, tonga tao an-baravaran'ny trano, izay nitoeran'ny vadiny, dia mitoetra, ary dia niankohoka teo.
19:27 Ary nony maraina dia tonga, ilay lehilahy nitsangana, Ary nanokatra ny varavarana, ka dia mba hamita ilay dia fa izy efa nanomboka. Ary indro, ny vadiny no mipetraka eo anoloantsika dia ny varavarana, amin'ny tànany manolo-tanana amin'ny tokonam.
19:28 ary, mieritreritra fa niala sasatra izy, nanao taminy hoe:, "Mifohaza, ary aoka isika handeha. "Fa satria izy tsy nanome valiny, tonga saina fa efa maty, dia naka azy ka, ary nametraka azy teo amin'ny borikiny, dia niverina ho any an-tranony.
19:29 Ary rehefa tonga, dia naka ny sabatra, Ary Elisa nanapaka tao an manorotoro ny faty ny vadiny, sy ny taolany, ho roa ambin'ny folo toko. Ary izy naniraka ny sekely ho any amin'ny fari-tanin'i Israely.
19:30 Ary rehefa samy efa nahita izany, niantso mafy izy ireo niara-, "Mbola tsy nisy toy izao, na natao teo amin'ny Isiraely, hatramin'ny andro razanay niakatra avy tany Ejipta, hatramin'ny 'izao fotoana izao. Aoka ho entina ny fehezanteny ary aoka isika hanapa-kevitra iombonan'ny inona no tokony hatao. "
20:1 Ary toy izany koa ny zanak'Israely nivoaka toy ny olona iray, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, ny tany Gileada, Dia nivory, anoloan 'ny Tompo, tany Mizpa.
20:2 Ary ny loholona, ary ny fokon'i Israely, nivory toy ny fiangonan'ny ny vahoakan 'Andriamanitra, efatra hetsy miaramila an-tongotra ho an'ny ady.
20:3 (Fa tsy miafina amin'ny taranak'i Benjamina fa ny taranak'i amin'ny Isiraely efa niakatra tany Mizpa.) Ary ny Levita, ny vadin-dravehivavy novonoina, izay, rehefa nanontany ny amin'ny fomba lehibe toy izany heloka efa natao,
20:4 namaly: "Nankany an Gibean'ny Benjamina, miaraka amin'ny vadiko, ary navily ho any amin'io toerana io.
20:5 Ary indro, ny mponina tao amin'izany tanàna izany, amin'ny alina, nanodidina ny trano izay mitoetra aho, ta-hamono ahy. Dia nanararaotra ny vadiko toy izany tsy mampino fahatezeran'ny filan'ny fa amin'ny farany dia maty izy.
20:6 Ary nitondra azy niakatra, No handringanako azy ho tapa, ary naniraka ny ampahany ho any amin'ny fari-tanin'ny fanananareo. Fa tsy toy izany taloha nefarious heloka bevava, ary heloka lehibe, nataony teo amin'ny Isiraely.
20:7 Ianareo rehetra manatrika eto, Ry zanak'Israely. Mamantatra izay tokony hatao. "
20:8 Ary ny olona rehetra, mitsangana, Namaly toy ny tenin 'ny olona iray: "Isika tsy hiverina ho any amin 'ny trano rantsan-kazo, ary tsy hisy olona hiditra ao an-tranony.
20:9 Fa izao no hataonareo itovizantsika an'i Gibea:
20:10 Isika no mifidy folo lahy avy zato avy ny foko rehetran'ny Israely, dia zato amin'ny arivo, ary arivo amin'ny iray alina, mba hitondra vatsy ho an'ny miaramila, ary mba ho afaka hiady Gibean'ny Benjamina, ary hamaly azy noho ny heloka bevava araka ny mendrika. "
20:11 Ary ny Isiraely rehetra nivory hamely ny tanàna, toy ny olona iray, amin'ny iray saina sy iray torohevitra.
20:12 Dia naniraka olona nankany amin'ny fokon'i Benjamina manontolo, izay nanao hoe:: "Nahoana no maro be toy ny faharatsiana no eo aminao?
20:13 Vonjeo ny mponina tao Gibea, izay efa natao izany trangan-javatra mampalahelo asa, mba ho faty, ary toy izany koa fa ny ratsy mba halaina Israely. "Ary tsy vonona ny hihaino ny didin'i rahalahiny, ny zanak'i Isiraely.
20:14 Fa tsy, avy tany ny tanàna rehetra izay teo ny loka, dia nivory tao Gibea, mba hahafahany mitondra azy fanampiana, ary toy izany koa mba hiady hanohitra ny olona Isiraely rehetra.
20:15 Ary hita avy amin'ny Benjamina, dimy arivo amby roa-dahy nahatan-tsabatra, ankoatra ny mponina tao Gibea,
20:16 izay dia fiton-jato lahy matanjaka indrindra, niady tamin'ny ankavia ary koa ny ankavanana, sady namoaka vato avy amin'ny antsamotady, ka marina fa izy ireo dia afaka hamely na dia singam-bolo iray, ary ny lalana ny vato dia tsy mba malahelo amin'ny andaniny roa.
20:17 Ary koa, teo anivon 'ny lehilahy amin'ny Isiraely afa-tsy ny taranak'i Benjamina, dia hita efatra hetsy nahatan-tsabatra, ary izay voaomana ho amin'ny ady.
20:18 Dia niainga izy ka nankany amin'ny tranon'Andriamanitra, izany hoe, an'i Silo. Ary izy ireo nanontany an'Andriamanitra, ka hoy izy:, "Iza no ho, eo amin 'ny tafika, ny voalohany mba hiady hiady amin'ny taranak'i Benjamina?"Ary Jehovah namaly azy ireo, "Aoka ny Joda ho mpitarika."
20:19 Ary niaraka tamin'izay ny Zanak'Isiraely, eny, nifoha maraina, nanao toby akaikin'i Gibea.
20:20 Sy mametraka nivoaka avy tao hiady Benjamin, izy ireo nanomboka herisetra tao an-tanàna.
20:21 Ary ny taranak'i Benjamina, niala Gibea, namono amby roa-roa arivo lahy avy amin'ny zanak'Israely, tamin'izany andro izany.
20:22 Ary ny Zanak'Isiraely, matoky na hery sy ny maro, mametraka ny miaramila mba, amin'ny toerana iray izay efa nila ady eo anoloan'ny.
20:23 Alohan'izany anefa dia niakatra koa ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah, na dia mandra-pahalin'ny andro. Ary izy ireo naka hevitra taminy ka nanao hoe:, "Tokony hitohy hatrany, mba hiady tamin'ny taranak'i Benjamina, ry rahalahy, na tsia?"Dia namaly azy ireo, "Niakatra hamely azy ireo, ary manatanteraka ny ady. "
20:24 Ary nony avy ireo zanak'Andriamanitra amin'ny Isiraely efa foana hanao hiady amin'ny taranak'i Benjamina amin'ny andro manaraka,
20:25 ny taranak'i Benjamina nivoaka vaky afaka amin'ny vavahadin'ny Gibea. Ary izy ireo fivoriana, dia nanao toy izany mirediredy famonoana azy ireo fa namono lehilahy valo arivo sy iray nahatan-tsabatra.
20:26 Vokatr'izany, ny zanak'i Isiraely nandeha ho any an-tranon'Andriamanitra, ary nipetraka teo, dia nitomany teo anatrehan'i Jehovah. Ary nifady hanina tamin'izany andro izany mandra-paharivan'ny andro, ary dia nanatitra sorona dorana ho azy sy ny niharam-boina-pihavanana.
20:27 Ary izy ireo nanontany momba ny fanjakana. Tamin'izany fotoana izany, ny Vata misy ny fifanekena nataon'i Jehovah dia tany amin'io toerana io.
20:28 ary Finehasa, ny zanak'i Eleazara, ny zanak'i Arona, no voalohany mpanapaka ny trano. Ary noho izany, dia naka hevitra ny Tompo, ka hoy izy:, "Tokony hitohy hatrany amin'ny hiady amin'ny taranak'i Benjamina, rahalahy, sa tokony hitsahatra?"Ary hoy Jehovah taminy: "miakatra. Fa rahampitso, Hatolotro eo an-tananao. "
20:29 Ary ny zanak'Israely nametraka otrika manodidina an'i Gibea ny tanàna.
20:30 Dia nentiny nivoaka ny miaramilany ny Benjamina fanintelony, toy ny efa nataony tamin'ny andro voalohany sy faharoa fotoana.
20:31 Fa ny taranak'i Benjamina indray triatra nivoaka avy tao an-tanàna tamim-pahasahiana. Ary satria ny fahavalony no mandositra, dia nanenjika azy lavitra, ka mba mandratra na hamono ny sasany amin'izy ireo, toy ny efa nataony teo amin'ny andro voalohany sy faharoa. Ary nampihemotra ny sorony roa miaraka lalana, mitondra azy ireo ho amin'ny Betela, ary ny anankiray kosa an'i Gibea. Ka dia namely tokony ho telo-polo lahy.
20:32 Fa nataon'izy ireo kosa fa latsaka indray izy ireo toy ny efa nataony teo aloha. Fa raha tokony, mahay feigning sidina, dia nanaiky drafitra mba hitaona azy ireo hiala ao an-tanàna, ary toa nandositra, mba hitarika azy ireo nanaraka ny lalana voalaza etsy ambony.
20:33 Ary toy izany koa ny Zanak'Isiraely, eny, nifoha amin'ny toerana, mametraka ny miaramila mba, eo amin'ny fitoerana izay atao hoe Bala-tamara. Toy izany koa, ny Otrika izay nanodidina ny tanàna nanomboka, tsikelikely, mba haneho ny tenany,
20:34 ary handroso eo amin'ny faritra andrefan'i an-tanàna. Koa, hafa iray alina ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely ka efa nampahatezitra ny ady amin'ny mponina eo an-tanàna. Ary nitombo ny ady navesatra tamin'ny taranak'i Benjamina. Ary izy ireo tsy tonga saina fa, amin'ny lafiny rehetra izy, ny fahafatesana nananontanona.
20:35 Ary Jehovah namely azy ireo eo imason'ny ny Zanak'Isiraely, dia novonoiny, tamin'izany andro izany, dimy arivo amby roa tamin'izy ireo, miaraka amin'ny iray-jato lahy, miaramila rehetra, ary ireo izay nahatan-tsabatra.
20:36 Fa ny taranak'i Benjamina, rehefa nahita ny tenany mba ho malemy kokoa, Nanomboka nandositra. Ary ny Zanak'Isiraely mamantatra izany, dia nanome azy toerana nandositra, ka dia mba tonga any amin'ny otrika izay voaomana, izay efa napetraka teo akaikin'ny tanàna.
20:37 Ary rehefa avy nitsangana tampoka avy miafina, ary ny an'i Benjamina efa niamboho ho an 'ireo izay nandringana azy teo, dia niditra tao an-tanàna, ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra.
20:38 Ary ny zanakalahin'i amin'ny Isiraely efa nanome famantarana ho an 'ireo izay efa nametraka in otrika, amin'izay mba, taorian 'ny efa nahazo ny tanàna, izy ireo no mandrehitra afo, sy ny setroka niakatra ho any amin'ny avo, izy ireo no mampiseho fa afaka ny tanana babo.
20:39 Ary avy eo, ny Zanak'Isiraely Takatry famantarana izany nandritra ny ady (Fa ny taranak'i Benjamina efa nihevitra fa nandositra, sady nanenjika azy amin-kery, nanapaka telo-polo lahy avy amin'ny tafika).
20:40 Ary nahita zavatra toy ny andry setroka niakatra avy tany amin'ny tanàna. Toy izany koa, Benjamin, indray mijery, nandinika fa afaka ny tanana babo, fa ny afo no nentina any amin'ny avo.
20:41 Ary ireo izay eo anatrehan'i efa Mody nandositra, mihodina ny tavany, , nanohitra azy mafy kokoa. Ary nony avy ireo zanak'Andriamanitra nahita izany Benjamin, dia nampihemotra ny sorony nandositra,
20:42 ary nanomboka mankany amin'ny lalana mankany amin'ny efitra, ny fahavalo nanenjika azy ireo amin'io toerana io ihany koa. Koa, ireo izay nandoro an-tanàna nifanena taminy koa.
20:43 Ary dia toy izany no nitranga fa efa nikapa ny andaniny roa ny fahavalo, ary tsy nisy fialantsasatra ho an'ny faty. Izy ireo no maty ary namely ny ilany atsinanan'ny an-tanànan'i Gibea.
20:44 Ary ireo izay novonoina teo amin'ny toerana iray dia valo arivo sy iray alina, tena matanjaka mpiady rehetra,.
20:45 Ary izay sisa Benjamina efa nahita izany, dia nandositra nankany an-tany foana. Ary izy ireo nandeha nanatrika ny vatolampy izay atao hoe Rimona. Amin'izany sidina ihany koa, eo anivon'ireo izay niely nandao amin'ny lalana samihafa, dia novonoiny ho dimy arivo lahy. Ary na dia vao mainka niparitaka rehetra, dia mbola nanenjika azy ireo, ary avy eo dia novonoina ho faty anankiray roa arivo.
20:46 Ary dia toy izany no nitranga fa ireo rehetra izay voavono hatramin'ny Benjamin, amin'ny toerana isan-karazany, dia dimy arivo amby roa-mpiady, tena vonona ny handeha hiady.
20:47 Ary dia nisy nijanona avy amin'ny isan'ny Benjamina manontolo enin-jato lahy izay afaka mandositra sy handositra ho any an-tany foana. Dia nanorim-ponenana teo amin'ny harambato any Rimona, fa efa-bolana.
20:48 Fa ny Zanak'Isiraely, niverina, dia namely tamin'ny sabatra izay sisa rehetra tao an-tanàna, avy tamin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny tanàna rehetra sy ny zana-bohiny Benjamina izay efa levon'ny afo mandevona.
21:1 Ary ny zanakalahin'i amin'ny Isiraely efa nianiana koa dia naka tany Mizpa, ka hoy izy:, "Tsy misy amintsika hanome ny zananivavy dia ho vady ho an'ny taranak'i Benjamina."
21:2 Ary ny olona rehetra nitsangana tamin'ny tranon'Andriamanitra any Silo. Ary nipetraka eo imasony mandra-paharivan'ny andro, dia nanandratra ny feony, ary nanomboka nitomany, amin'ny fisaonana lehibe, nanao hoe:,
21:3 "Nahoana, Tompo O, Andriamanitry ny Isiraely,, dia izao loza nitranga eo amin'ny firenenao, ka dia androany ny firenena iray dia halaina amintsika?"
21:4 Avy eo, nifoha tamin'ny voalohany fahazavana tamin'ny andro manaraka, dia nanorina alitara. Ary nanatitra sorona dorana sy ny niharam-boina-pihavanana teo, ka hoy izy:,
21:5 "Iza, avy tany rehetra ny firenen'Isiraely, Tsy hiakatra miaraka ny miaramilan 'ny Tompo?"Fa efa niozona sy lehibe fianianana, nony tonga tany Mizpa, fa na iza na iza no tsy eo dia hatao maty.
21:6 Ary ny Zanak'Isiraely, rehefa nitarika ho amin 'ny fibebahana ny rahalahiny Benjamin, nanao hoe: "Ny firenena iray dia alaina tsy ho azon'ny Isiraely.
21:7 Avy aiza no hahazo vady? Fa isika efa nianiana tamin'ny mahazatra rehetra fa dia tsy hanomezantsika azy ny zanakai-vavy. "
21:8 Izany no antony, hoy izy ireo, "Iza no, avy tany rehetra ny firenen'Isiraely, izay tsy niakatra ho an'i Jehovah tany Mizpa?"Ary, indro, ny mponina tany Jabesi-gileada no hita tsy mba efa nisy teo ny tafika.
21:9 (Toy izany koa, ao ny fotoana efa tao Silo, tsy hisy anankiray aminy hita mba ho eo.)
21:10 Koa araka izany ny naniraka iray alina ny lehilahy matanjaka indrindra, dia nampianatra azy ireo, nanao hoe:, "Mandehana, ka mameleza ny mponina any Jabesi-gileada amin'ny lelan-tsabatra, anisan'izany ny vadiny sy ny zaza amim-behivavy. "
21:11 Ary izao no ho izay tokony hatao: "Ny olona rehetra ny lehilahy lahy sy ny vavy, ary koa ny vehivavy rehetra izay efa nahalala lahy, dia hatao maty. Fa ny virjiny no hamandrika. "
21:12 Ary virijina efa-jato, izay tsy nahalala ny fandriana ny olona, hita avy tany Jabesi-gileada. Izy ka nitondra ireo ho any an-toby tany Silo, any amin'ny tany Kanana.
21:13 Dia naniraka olona nankany amin'ny taranak'i Benjamina, izay tao amin'ny harambato tao Rimona, dia nampianatra azy ireo, ka dia hahazo azy ireo soa aman-tsara.
21:14 Ary ny zanakalahin'i Benjamina dia, tamin'izany fotoana izany, sy ny vehivavy dia nomena azy ireo avy amin'ny zanakavavin'i Jabesi-gileada. Fa ny sasany kosa tsy hita, izay mba manome amin'ny Toy izany koa.
21:15 Ary ny Isiraely rehetra, dia nalahelo indrindra, ary izy ireo dia asa fivalozana ho nandrava ny firenena iray eo amin'ny Isiraely izy.
21:16 Ary izay lehibe amin'ny teraka nanao hoe:: "Ahoana no hataontsika amin'ny sisa, ireo izay tsy nahazo vehivavy? Fa ny vehivavy Benjamina no voakapa,
21:17 ary tsy maintsy mandray fikarakarana lehibe, ka hanao fanomezana ary maro be ny fahazotoana, ka ny firenena iray dia mety tsy ho amin'ny tondro-molotra amin'ny Isiraely.
21:18 Ary ny amin 'ny vavy, dia tsy afaka ny hanome azy ireo, rehefa voafatotry ny fianianana sy ny ozona, rehefa hoe:, 'Voaozona izay hanome misy zanany vavy ho vadin'ny Benjamita toy ny.' "
21:19 Ary nony niara-nihevitra, ka hoy izy:, "Indro, misy isan-taona panajana 'ny Tompo tao Silo, izay no misy ny avaratry ny tanànan'i Betela, ary teo amin'ny ilany atsinanana amin'ny lalana izay misy maka avy any Betela hankany Sekema, sy any atsimo ianao ao an-tanàna Lebona. "
21:20 Ary nandidy ny taranak'i Benjamina, ka hoy izy:: "Mandehana, Ary miere ao amin'ny tanim-boaloboka.
21:21 Ary rehefa ho efa nahita zazavavy avy any Silo ho entina mivoaka ho any dihy, araka ny fanao, hivoaka tampoka avy amin'ny tanim-boaloboka, ary aoka samy haka vady iray avy teo aminy, ka nandeha ho any amin'ny tanin'ny Benjamina.
21:22 Ary raha ny rainy sy ny rahalahiny tonga, ary manomboka hitaraina hamely anao sy ny miady hevitra, dia lazao aminy: ', Mamindrà fo azy ireo. Fa izy ireo tsy nahazo azy amin'ny rariny ny ady na ny fandresena. Fa tsy, mangataka ny handray azy ireo, nefa tsy mba nanome azy ireo, ary toy izany koa ny ota ho anao izany. ' "
21:23 Ary toy izany ny taranak'i Benjamina izy ireo nanao araka izay efa nanome baiko. Ary araka ny isany avy, ho an'ny tenany izy ireo nisambotra vady iray isan-, avy amin'ireo izay nitondra nivoaka dihy. Ary niditra tao amin'ny rakitra soa, ary nanorina ny tanànany, ary dia mbola velona taminy.
21:24 Ary ny Zanak'Isiraely koa dia niverina, araka ny fireneny sy ny fianakaviany, ho any amin'ny lainy. Ary tamin'izany andro izany, tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely. Fa tsy, samy nanao izay toa tsara ho an'ny tenany.